08/13/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Tuesday, August 13, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအားလုံး လိုလားကြတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လုပ်ကိုင် နေကြ သူတွေ လည်း လုပ်နေကြပါတယ်။ အစိုးရကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ လိုက်လျောကြိုးပမ်းနေတယ်။ ရှမ်းပြည် နယ် အစိုးရကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်တွေကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်တယ်ပြောတယ်။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး ပွဲတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ သဘောတူညီချက်တွေရယူပြီး အပစ်အခတ်တွေရပ်စဲကြတယ်။ နိုင်ငံရေး စကားဝိုင်းဆီသွားကြမယ်ပေါ့။ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ စေတနာတွေ သိပ်ကောင်းတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားကို မျှော်လင့်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတွေ သိပ်ပျော်ရတာပေါ့။
ဒါပေမယ့်လက်တွေ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရာမှာရော ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ စေတနာတွေမှန်ကြပါရဲ့ လား။ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးလို့ ပါးစပ်က တဖွဖွရွတ်ဆိုနေပြီး တလွဲတချော်ဖော်ဆောင်နေရင်ကော ငြိမ်းချမ်းရေးက ဝေးနေဦးမှာပါ။ ၇-၈-၂၀၁၃ ရက်နေ့ကပဲ ကျိုင်းတုံမှာ RCSS/SSA အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ရွက်ဆစ်က နေပြည်တော် မှာ သမ္မတနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာကို ပြန်ရှင်းပြလို့ သွားနားထောင်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ NLD၊ SNDP၊ SNLD၊ NDF၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ လားဟူပါတီက လူတွေ၊ မြို့မိမြို့ဖနဲ့ ရှမ်းစာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား တွေ ဒေသခံပြည်သူလူထုစုစုပေါင်း ၂၅၀ လောက်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အရင်တစ်ချိန်က သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ဆိုပေမယ့် လက်ရှိအစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတာ ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ကြီးကျယ်လာပြီပေါ့။ မြို့ကြီးရပ်ကြီးတွေအထိ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တက်ပြီး သွားလာ လုပ်ကိုင် နိုင်ကြ ပြီပေါ့။ RCSS/SSA အဖွဲ့အနေနဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့၊ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့၊ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးဖွဲ့စည်းဖို့နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ဖို့ ရည်မှန်း ချက်တွေ ရှိကြောင်း အစိုးရနဲ့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အစိုးရ၊ ပြည်နယ်အစိုးရ၊ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ ရှမ်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ ဝိုင်းဝန်လုပ်ဆောင်ကြတာတော့ကောင်းပါတယ်။ ရွက်ဆစ်တို့အဖွဲ့ ရှင်းပြ တာ တွေ ကို နားထောင်ရင်း တချို့ကိစ္စတွေကတော့ သူ့အပိုင်းကိုယ့်အပိုင်း၊ သူ့စည်းကိုယ့်စည်းလေး တွေ ရှိသင့် တယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ ရွက်ဆစ်တို့က မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးမယ်ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘိန်းခွန်ကောက် တာ အခုထိရှိတုန်းဆိုတော့ ဘိန်းစိုက်ပျိုးရေးကို သူတို့ကတစ်ဖက်လှည့်နဲ့ အားပေးနေကြ သလားပေါ့။
၂၀၁၄ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တဲ့အခါမှာလည်း ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှမ်းလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ သီးခြားစာရင်းကောက်ခံနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ လမ်းကြောင်းလွဲ နေမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးက ဘယ်နားနေမှန်းမသိသေးဘူး။ RCSS/SSA ဆိုတာ ရှမ်းပြည်နယ် တစ်ခု လုံးကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ပြောလို့မရတဲ့ ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါ။ ဒီလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ လေးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အစိုးရလို့ထင်ပြီး ကိုယ့်အလုပ်မဟုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်း ထင်ရပါ တယ်။ RCSS/SSA အဖွဲ့အနေနဲ့ တိုင်းပြည်အေးအေးချမ်းချမ်းရှိတာမြင်လိုတယ်လို့ ရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။ တကယ် ဆန္ဒရှိခဲ့ရင်တော့ RCSS/SSA အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပဲ အာရုံစိုက်သင့်တာပေါ့။ မြို့ပေါ်တွေအထိ လာပြီး ဆက်ကြေးကောက်တာတွေလည်း ရပ်သင့်ပါပြီ။ ဆက်ကြေးကောက်ခံမှုတွေ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ မရှိ ဘူးလို့ သူတို့က ငြင်းနေပေမယ့် ဆက်ပြီးကောက်ခံခြိမ်းခြောက်နေတုန်းပါပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အချိန်ဆွဲပြီး စစ်သားစုဆောင်းနေတာလည်း ဆက်ရှိနေတုန်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေက အလုပ်ပျက်၊ အကိုင်ပျက်နဲ့ ဒီဒဏ်တွေခံနေရတုန်းပါပဲ။
၂၄-၇-၂၀၁၃ရက်နေ့မှာ SSA(ရွက်ဆစ်)အဖွဲ့က ပေါ့ထောက်ဝေါင် (ခ) နှုတ်ခမ်းမွေးအဖွဲ့က မိုင်းယောင်း မြို့နယ် ၀မ်တပ်၊ ၀မ်ဒေ၊ ၀မ်မိုင်နဲ့ ၀မ်ကျူးကျေးရွာတွေက ရွာသား ၅၉ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးသွား တဲ့ ဖြစ်စဉ် အမှန်ကိုသိချင်လို့ ဒီပွဲမှာ သတင်းထောက်တွေက မေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ RCSS/SSA အဖွဲ့က တာဝန် ရှိသူတွေ မျက်နှာပျက်ရုံမှအပ ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမရှိပါဘူး။ အဖမ်းခံရသူတွေကတော့ ပြန်လွတ် လာကြပါပြီ။
RCSS/SSA အဖွဲ့ဟာ အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူထားလို့ ပြည်သူတွေက သူတို့ကိုတွေ့ဖို့ မကြောက် ပါနဲ့လို့ ပြောပေမယ့် ဆက်ကြေးကောက်တုန်း၊ စစ်သားစုဆောင်းတုန်းဖြစ်တဲ့ RCSS/SSA အဖွဲ့ကို ကျွန်တော်တို့ ကြောက်နေရတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ်အစိုးရက လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို RCSS/SSA အဖွဲ့က ၀င်စွက်ဖက်ပြီးလုပ်နေကြတော့ ဘယ်သူက ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အစိုးရလည်း ကျွန်တော်တို့ ရှမ်း တိုင်းရင်းသားတွေက ဘယ်သူခိုင်းတာလုပ်ရမှာလဲ ဆိုတာကို မေးလို့ရရင် မေးချင်လာပါတယ်။
(မော်ဒယ်) တွေကလွဲရင် ရင်သားရဲ့ လှပမှု၊ ကြည့်ကောင်းမှု၊
Posted by drmyochit Tuesday, August 13, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
အပေါ်ပိုင်းဗလာ (မော်ဒယ်) တွေကလွဲရင် ရင်သားရဲ့ လှပမှု၊ ကြည့်ကောင်းမှု၊ ဆွဲဆောင်မှုဆိုတာ တခုခုကို ဝတ်စား ထားရင်း အကဲဖြတ်ကြရတယ်။ ဒါဟာ အားသာချက်တခုပါ။ စမ်းသပ် လေ့လာမှု တခုအရ အမျိုးသမီး ၉၅% ဟာ သူတို့နဲ့ အသင့်တော်ဆုံး (ဘရာ) ကို မဝတ်ကြဘူးတဲ့။ ဒီလိုဖြစ်နေတာ မသိရှာကြဘူးလို့ပါ ဆိုလိုက်သေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် “ခွက်” နဲ့ “ရင်” အတိုင်းအတာတွေ မမှန်တဲ့အခါ တချို့မှာ ချောင်၊ တချို့မှာ ကြပ်၊ အကဲဖြတ်တော့ အမှတ် နည်းရော။
Bra size ရဲ့ Band size ဆိုတာ ပေကြိုးကို ရင်သားအောက် နေရာမှာထိ အတိအကျ တိုင်းရတယ်။ ခပ်တင်းတင်းထား တိုင်းပါမှ ချောင်မနေမှာ။ ဝတ်ကြည့်လိုက်လို့ လက်တချောင်းထက် ပိုဝင်နေရင် ကျယ်နေတယ်။ Cup Size တိုင်းတာလဲ အဲလိုဘဲ။ ရင်သား အဝိုင်းကို ပေကြိုးပတ်တိုင်းတယ်။ ဆိုပါတော့ ၃၃ လက္မ္မရှိနေသူဟာ 34D Cup ဝတ်မှ အံကျဖြစ်မယ်။ ဝတ်ပြီး မှန်ရှေ့မှာကြည့်လို့ ရင်သားဆိုင်ဟာ (ဘရာ) ဘေးကနေ စူနေရင် သေးတယ်။ အရွယ်သေးနေလို့ အတွင်းကနေ Synthetic nylon padded brassieres လူလုပ်ပစ္ပ္စည်း တမျိုးမျိုးခံတဲ့အခါ နိုင်လွန် မသုံးသင့်ပါ။ တချိန်မှာ ကင်ဆာ မဖြစ်ဘူး မပြောနိုင်လို့။
ရင်သား တွဲကျနေတယ်ဆိုတာ “နှိုင်းပြီး အကဲဖြတ်တာ” ဖြစ်တယ်။ အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူး၊ သူများလောက် မလှဘူး။ “အလိုဆန္ဒအရ ပြင်စရာတခု” လို့ သတ်မှတ်လိုက်တာပါဘဲ။ လူကောင်သေးသူက ထွားချင်သူရှိသလို Small is beauty “သေးတာကိုက လှတာ” လို့ လက်ခံသူတွေလဲ ရှိတာပါဘဲ။
သူများတွေဆီမှာတော့ ရှားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ “အပျိုကြီး ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း” တွေ ပြေကြ၊ နောက်ကြ၊ ရေးကြတာ မနည်းဘူး။ အားနာလို့လား၊ ရိုင်းမှာ စိုးလို့လားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ရင်သားသေးငယ်လို့၊ တင်းတင်း-ရင်းရင်း မရှိလို့ ဆိုတာ အကြောင်းခံအနေနဲ့ ရေးကြတာ မတွေ့ရပါ။ “ငါ့အရှိအတိုင်း မနှစ်သက်ရင်လဲ နေပေါ့” လို့ သဘောထားလိုက်တာ မကောင်းပါလား။
ရင်သားဆိုတာ ကြွက်သားနဲ့ မတူပါ။ ကြွက်သားကို လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ သန်မာအောင်၊ ကြီးထွားအောင် လုပ်နိုင်တယ်။ ရင်သားကို တည်ဆောက် ထားတာက အတွင်းထဲမယ် အဆီကသာ များတယ်။ နို့ပြွန်-နို့အိတ်လေးတွေနဲ့ အဲဒါတွေကို တွယ်ဆက်ပေးတဲ့ (တစ်ရှူး) တွေသာ ရှိတယ်။ ရင်ပတ်နံရံက ကြွက်သားပြားတွေ အပေါ်မှာ တင်ယုံတင်နေတာမို့ အထိန်း-အကွပ် မရှိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သိပ်လွတ်လပ်တယ်။ သူ့ အလေးချိန်နဲ့သူ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားနဲ့ အောက်ဖက်ကို ဦးတည်နေတယ်။ ခုန်ရလေလေ အောက်ကျလေပေါ့။ ဆင်မယဉ်သာ မသွားလို့ကတော့ ဆိတ်မ ဘယ်-ညာ လှုတ်ခါနေပါမယ်။
ဒါ့ကြောင့် (ဗလာ) ခေတ်အရင် (ဘရာ) ခေတ်၊ (ဘောဒစ်) ခေတ်၊ ဒိအရင်က (ဇာဘော်လီ) ခေတ်။ ရှေးတုံးက (ရင်စီး) ခေါ်တာကို ကြပ်နေအောင် ဝတ်ခဲ့ကြတာပါ။ လူတွေ ယဉ်ကျေးလာသလို ခေတ်နဲ့လဲ လိုက်အောင် ဝတ်စားလာကြလို့ ဖြစ်တယ်။ အာဖရိကမှာ အခုထိ အပေါ်ဗလာရှိသေးတာက ခေတ်မီတာ မဟုတ်မှန်း လူတိုင်း အသိပါ။ သိပ်ကြပ်တာတော့ ကျန်းမာရေးအရ မကောင်းပါ။
တွဲကျနေတာမှာလဲ မတူကြပါ။ အသက်အရွယ်ကြီးလို့၊ ကလေးတွေ မွေးရတာများလို့၊ အနေအထိုင် ဂရုတစိုက် မနေတတ်လို့၊ ငယ်တုံး-ပျိုတုံးကလို မဟုတ်တော့ဘဲ သိပ်သိသိ သာသာကြီး တွဲ-ပျော့-ကျလာတယ်။ တချို့ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နဲ့ “ကြည့်ကောင်းအောင် ကျနေတာမျိုး” လဲရှိတယ်။ ရင်သားရဲ့ထိပ် နို့သီးဟာ ရှေ့တည့်တည့်ကနေ မြင်ရရင် အလည်ရဲ့ အောက်နားလေးမှာ ရှိနေတာက ခေါင်းလောင်း ဆွဲထားသလို အသီးထိပ်ဖျားဟာ အောက်စိုက်နေတာထက် ကြည့်ပျော် ရှုပျော် ရှိပါမယ်။ အရပ်လည်းရှည် ကျောယားလည်း ရှည်တာမို့ သူ့လောက် အရပ် မရှည်သူတွေထက် ရင်သားက အောက်ကျ နေလိမ့်မယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြည့်ရင် ပခုံးကနေ ရင်သားထိပ်နေရာဟာ သူများတွေထက် ကွာဝေးပေမဲ့ အချိုးအဆက် ကျနေလို့ လှတယ် ပြောကြမှာပါဘဲ။
တကယ်တန်း ရင်သား အချိုးအစားကျမှုဆိုတာ “လူအများ မြင်ရမဲ့၊ မြင်စေအာင်လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ရင်သား အပေါ်ပိုင်းနေရာ” ထက် “နို့သီးကနေ အောက်နဲ့ နောက်ဘက် ရင်ပတ်နံရံဆီ သွားတဲ့နေရာ” သာ ဖြစ်ပါမယ်။ ဆူပါမော်ဒယ်တွေ၊ (မူဗီ-စတား) မင်းသမီးချောတွေ Evening Gowns, Cocktail Dresses, Prom Dresses ဝတ်စုံတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံလို့ သိပ်လှချင် လှပေမဲ့ အပေါ်ဗလာပြဘို့ မလှသူတွေ ရှိတယ်။ ဘေးတိုက် ကြည့်မယ်ဆိုပါစို့။ မျဉ်းကွေးက ဘယ်လိုလဲ။ ပစောက် ပုံလား။ ရကောက်-ပြောင်းပြန်လိုလား။ နို့သီးဖက်က မျဉ်းထက် ရင်ပတ်ဖက်က မျဉ်းဟာ ပိုရှည်နေလေလေ အလှ နည်းလေလေ။ အရွယ်သေးပေမဲ့ အချိုးအစားကျတာက သာပါမယ်။ ဘရာ Cup size တူသူ နှစ်ဦးဟာ Deep cleavage အတူဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။ ချိုင်းအောက်နေရာ ပတ်လည်ကျဉ်းသူတွေမှာ Cleavage ပိုသိသာမယ်။ “ကောက်ကြောင်း” က ဆွဲဆောင်မှုမှာ အလေးသာတယ်လို့ ပြောတာတွေ ရှိတယ်။
ကလေး နို့တိုက်ရာမှာလဲ နှစ်ဘက်ကို ညီတူမျှတူ တိုက်ပေးရမယ်။ တဖက်ဖက်မှာ အလုံး-အကြိတ်-အနာ ခွဲထုတ်ထားရရင် အဲဒီဘက်က ရင်သား အရွယ်သေးနေမှာဘဲ။ Nourishing cream လိမ်းတာနဲ့ Exercises လုပ်ပါလို့ အလှအပ-ကျန်းမာရေး၊ အကြံပေး-ဈေးရောင်းသူတွေက ဆိုပါတယ်။ လိမ်းရာမှာ ရှေ့ကနေလိမ်း၊ ရင်သား နှစ်ခုလုံး နှံ့အောင်လိမ်း၊ ၁ဝ-၁၅ ကြိမ်၊ နာရီလည်သလိုနဲ့ ပြောင်းပြန် လိမ်းနယ် ပေးရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Aerobics လို လေ့ကျင့်ခန်း ပြင်းပြင်းထံထံ လုပ်သူတွေ အတွင်းခံ ကောင်းကောင်း မဝတ်ရင် ရင်သား တွဲကျလာမယ်။ Drooping or Sagging breasts မဖြစ်ရအောင် Good supportive bra ဝတ်ဆင်ပါ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ချိန်တွေမှာ ဝတ်ပါ။
ဆန္ဒပြမှုကြောင့် ကင်တားနားနှင့် မြို့မိမြို့ဖများ တွေ့ဆုံ မည့် အစီအစဉ်ဖျက်သိမ်း
Posted by drmyochit Tuesday, August 13, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနားသည် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ ကို အကြမ်းဖက်သူများ အဖြစ် စွပ်စွဲထားပြီး ဘင်္ဂါလီများကို နိုင်ငံသား ဖြစ် ခွင့်ပေးရန် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် ပြောဆိုခြင်း အပါအဝင် ဘင်္ဂါလီများအတွက် ဘက်လိုက် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုဆိုကာ ယင်းသို့ ကန့်ကွက်ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေ့မြို့ မြို့မိမြို့ဖ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးသန်းထွန်းက ပြောကြားသည်။
စစ်တွေမြို့၌ သြဂုတ်လ ၁၃ရက်နေ့ ကင်တားနားနှင့် မြို့မိမြို့ဖများ တွေ့ဆုံ မည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း ဖျက်သိမ်းထားကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့သို့ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိနေသည့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် သောမတ်အိုဟေး ကင်တားနားကို မြို့ခံ ၅၀ကျော်က ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်း ယင်းဆန္ဒပြမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ဒေါ်ညိုအေးက ပြောကြားသည်။
ကင်တားနားကို စစ်တွေမြို့ လေဆိပ်မှ အထွက်တွင် အမျိုးသမီး အများစု ဖြစ်သော မြို့ခံ ၂၀ ခန့်က ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင်ကာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး သင်္ဘောဆိပ်တွင် တစ်ကြိမ် မြို့ခံ ၃၀ကျော် က ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင်ကာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်း ရခိုင် အမျိုးသမီး ကွန်ရက်၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သူ ၎င်းက ဆိုသည်။
ဆန္ဒပြသူများသည် ဘင်္ဂါလီများကို သွေးထိုး လှုံ့ဆော်သူ ကင်တားနား ထွက်သွား၊ လူ့အခွင့်အရေး အလွဲသုံးစားလုပ်သူ ကင်တားနား ထွက်သွား၊ ကင်တားနား သင်၏ ဘက်လိုက် အကြံပြုချက်များကို အလိုမရှိ၊ ကင်တားနား ဘင်္ဂါလီအတွက် ပွဲစား မလုပ်နဲ့ ထွက်သွား၊ ဘင်္ဂါလီများကို ကင်တားနားနှင့် အတူ ခေါ်သွားရန် အချက် ငါးချက် ပါဝင်သည့် ဆိုင်းဘုတ်များကို ကိုင်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ကင်တားနားက ဆန္ဒပြသူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၎င်း အစီရင်ခံစာ တင်ရာတွင် ဘက်ပေါင်းစုံက အသံများကို နားထောင်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ များကို တင်ပြခဲ့သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ပြီး ယခု ခရီးစဉ်တွင်လည်း ဘက်ပေါင်းစုံနှင့် တွေ့ဆုံရန် ရှိကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခြင်းကို လည်း ကြိုဆိုသည်ဟု ပြောဆိုကြောင်း ကင်တားနား ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါ သွားသူ ကုလသမဂ္ဂ သတင်း ပြန်ကြားရေးဌာန ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိ ဦးအေးဝင်းက ပြန်လည် ပြောဆိုသည်။
ကင်တားနားသည် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိကာ ယင်းမှ တစ်ဆင့် ဘူးသီးတောင်မြို့သို့ သွားရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်တွင် အကျဉ်းထောင်များ၊ ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည် စခန်းများကို သွားရောက် လေ့လာမည် ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့မှ သိရှိရသည်။
ကင်တားနားသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သြဂုတ်လ ၁၁ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် မိတ္ထီလာ မြို့နယ်တို့တွင် မတူညီသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ကြား ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများကို လေ့လာမည် ဖြစ် ပြီး ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးတို့ကို လေ့လာ စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယခု ခရီးစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လေ့လာ တွေ့ရှိချက်များကို လာမည့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် အစီရင်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ကောင်စီထံမှ သိရှိရသည်။
ကင်တားနားသည် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများ ကို လေ့လာရန် လေးကြိမ်မြောက် သွားရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by drmyochit Tuesday, August 13, 2013, under ဓါတ်ပုံ Album | No comments
"ရှင်ဘယ်နေရာရောက်နေတုန်း၊ ရှင့်ကို စောင့်နေတယ်" - နန်းခင်ဇေယျာ
Posted by drmyochit Tuesday, August 13, 2013, under အနုပညာ | No comments
လွန်ခဲ့တဲ့ မိနစ်ပိုင်းကပဲ အချိန်တိုအတွင်း အင်တာနက်သုံးစွဲသူ မြန်မာတွေရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ နာမည်ကြီး လာရင်း သရုပ်ဆောင်၊ ကြော်ငြာ မင်းသမီး ဖြစ်လာသူ နန်းခင်ဇေယျာက သူ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ဓာတ်ပုံ ၂ ပုံနဲ့တကွ စာသားတချို့ကို ရေးသားထားပါတယ်။
"ရှင် ဘယ်နေရာ ရောက်နေတုန်း၊ ရှင့်ကို စောင့်နေတယ်" ဆိုပြီး နန်းခင်ဇေယျာက မင်္ဂလာ သတို့သမီး ၀တ်စုံနဲ့ တကိုယ်တည်း စောင့်ဆိုင်းနေပုံကို သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာမှာ တင်ထားပါတယ်။
နန်းခင်ဇေယျာက ချစ်သူ မရှိလို့လား၊ ချစ်သူ ရှိရဲ့နဲ့ အဲဒီချစ်သူကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုတာလား ဆိုတာတော့ သူ့ ရဲ့ ရေးသား ဖော်ပြချက်က မရှင်းလင်းပါဘူး။
သူတင်ထားတဲ့ ပို့စ် အောက်မှာ တချို့ ကွန်မန့်တွေမှာလည်း မင်းအတွက် အဆင်သင့်ရှိတယ်တို့ ၊ ဘာတို့ ရေး ထားတာတွေလည်း တွေ့ရသလို ငါကတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာမို့ နောက်ကျမယ်လို့ ရေးထားတာ လည်း ရှိလေရဲ့။
ဘာမှ မရည်ရွယ်ပဲ အပျော်သဘောနဲ့ နောက်တာပါလို့ နန်းခင်ဇေယျာက တင်ထားတာဆိုရင်တော့ မျှော်လင့်နေ သူ မောင်မောင်၊ ကိုကိုတွေလည်း ရင်ကျိုးရမယ် ထင်ပါရဲ့။
အိမ့်သံစဉ် ~ ဧရာဝတီ
Sex ၏ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ အစွမ်း
အိမ်ထောင်သည်တို့ တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးပြီး လင်မယား အတူနေတာကြောင့် အောက်ပါ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိစေပါတယ်။
မဟာမုနိဘုရားကြီး ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူရာနေရာသို့ မိန်းမလျာများ တက်ရောက်ခွင့်မပြုတော့
မဟာမုနိဘုရားကြီး ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူခွင့်အတွက် အမျိုးသားများကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုသော်လည်း မိန်းမလျာများမှာ အမျိုးသမီးအ၀တ်အစားများကို ၀တ်ဆင်ကာတက်ရောက်မှုများရှိနေသည့်အတွက် မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် တက်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မဟာမုနိဘုရားဂေါပကအဖွဲ့မှ သိရသည်။
`ဘုရားကို ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်တာမှာ ယောက်ျားတွေကိုပဲ တက်ရောက်ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပေမယ့်၊ ယောက်ျား ဖြစ်ပေမယ့် မိန်းမလျာဖြစ်နေတဲ့သူတွေက မိန်းမအ၀တ်အစားဝတ်ဆင်တာတို့၊ မိတ်ကပ်လိမ်းချယ်ပြီး ကပ်လှူတာတို့ကြောင့် အရင်နှစ်က ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အခုတောင်ပြုန်းပွဲတော်ကာလမှစပြီး တက်ရောက်ခွင့်ပြု တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး´ဟု မဟာမုနိဂေါပကအဖွဲမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဘုရားဖူးပြည်သူများက မိန်းမလျာများကို မိန်းမအသွင်မြင်ကာ ဂေါပကအဖွဲ့အား အထင်အမြင်သေးနိုင်ခြင်း၊ တိကျသေချာသော စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်ထား ရှိလိုခြင်းနှင့် ဘုရားဖူးပြည်သူများစိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ပေါ်စေရေး ရည်ရွယ်ကာ ယခုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူခြင်းပြုလုပ်ရာ အ၀င်လမ်းတွင် ဘုရားကြီးလုံခြုံရေးများကို ချထားဆောင်ရွက်ကာ မိန်းမလျာ များကို စိစစ်ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာများကိုလည်း ဂရုပြုဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် CCTVများကိုလည်း တပ်ဆင်ထားရှိကာ လိုအပ်သလို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
`ဘုရားကြီးအတွင်း လိုအပ်တဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကို ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်၊ ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းနိုင်အောင် လုံခြုံရေးအတွက် လုံခြုံရေးအင်အား ၆၀ကျော်ခန့်အပ်ထားရှိပြီး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် စီစီတီဗွီကင်မရာ ဆယ်လုံးနဲ့လည်း စောင့်ကြည့်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်´ဟု ဘုရားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဘုရားကြီးပရ၀ဏ်အတွင်း ခိုးဆိုးနှိုက်များကိုလည်း နေ့စဉ် ဘုရားကြီးလုံခြုံရေးအဖွဲ့နှင့် နယ်မြေ အလိုက် တာဝန်ကျရဲများဖြင့် အရေးယူမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး ဘုရားကြီးဝန်းကျင်တွင် ကော်ရှူမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် ကော်ရှူသူများကိုလည်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုအခါတွင် ကော်ရှူသူ ၁၁ဦးအထိ ဖမ်းဆီးကာ သက်ဆိုင်ရာရဲဌာနသို့ အပ်နှံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
“ခွဲခြားလိုစိတ်မရှိပေမယ့် ဒီလိုမျိုး အမျိုးသမီးအ၀တ်အစားဝတ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ တားမြစ်သင့်ပါတယ်”ဟု ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်နေ ကိုနန္ဒက ပြောသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, August 13, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
ချစ်သူနှင့် လက်ထပ် ထိမ်းမြားခွင့် ရခဲ့ခြင်းအတွက် အလွန် ပျော်ရွှင်မိကြောင်း တောင်ကိုရီးယား ရုပ်ရှင် မင်းသား လီဗြောင်ဟွန်းက ဝန်ခံ ပြောကြားလိုက်သည်။ တောင်ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်လောက၏ ဦးဆောင် မင်းသား အဖြစ် လူသိများပြီး ဟောလီးဝုဒ်ထိ ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့သူ လီသည် ကာလရှည်ကြာ တွဲခဲ့သည့် ချစ်သူ လီမင်ဂျွန်းနှင့် စနေနေ့က လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ ဆိုးလ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော မင်္ဂလာပွဲသည် တောင် ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်လောက၏ အလင်းလက်ဆုံး ကြယ်နှစ်ပွင့် ပေါင်းဖက်မှုလည်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အသက် (၄၃)နှစ်ရှိ မင်းသားက ၎င်း၏ ချစ်သူနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ရမှုအပေါ် "ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ် လာတာပါပဲ"ဟု မီဒီယာများထံ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
မင်းသမီး လီကလည်း "မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်မတို့ မင်္ဂလာပွဲနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ လျှပ်စီးတွေလက်ပြီး မိုးတွေလည်း ခြိမ်းတယ်။ ကိုရီးယား ရှေးရိုး စကားပုံတွေအရ လက်ထပ်ပြီးစ မင်္ဂလာ စုံတွဲတွေအတွက် လျှပ်စီးနဲ့ မိုးခြိမ်းမှုတွေက ကောင်းမွန်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အတူတကွ အကောင်းဆုံး ရှေ့ဆက်သွားချင်ပါတယ်"ဟု ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ G.I. Joe ဇာတ်ကားနှစ်ခုတွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သလို Iris ဇာတ်လမ်းတွဲများကြောင့် နာမည်ကျော်ခဲ့သော လီသည် မကြာသေးမီက ရုံတင်ခဲ့သည့် Red 2တွင်လည်း မင်းသား ဘရုစ်ဝီလီနှင့်အတူ အပြိုင်ကြဲထားခဲ့သည်။
ပြည်သူ့အသံ နားထောင်လို၍ တက္ကစီမောင်းသည့် နော်ဝေးဝန်ကြီးချုပ်
Posted by drmyochit Tuesday, August 13, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ပြည်သူ့အသံကို ကိုယ်တိုင်နားထောင်လို၍ တက္ကစီကားမောင်းခဲ့သည့် နော်ဝေးဝန်ကြီးချုပ် ပြည်သူလူထုနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး ထိတွေ့ စကားပြောခွင့် ရရန်အတွက် နော်ဝေးနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဂျန်စတိုလ်တန်ဘာ့ဂ် အနေဖြင့် ကိုယ်တိုင် တက္ကစီမောင်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အော်စလိုမြို့တော်တွင်း၌ ဝန်ကြီးချုပ် အနေဖြင့် တစ်ရက်တာ နေ့လယ်ခင်း အချိန်တွင် တက္ကစီတစ်စင်းကို လှည့်ပတ် မောင်းနှင်ကာ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ စတိုလ်တန်ဘာ့ဂ်က တက္ကစီပေါ်တွင် ကားသမားနှင့် ခရီးသည် အပြန်အလှန် ပြောဆိုမှုသည် ပြည်သူများ၏ စစ်မှန်သော ဆန္ဒကို အမှန်တကယ် ဖော်ထုတ်နိုင်သည့် နေရာတစ်ခုဟု ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ယခုအစီအစဉ်ကို လက်တွေ့ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဇွန်လအတွင်းက နေကာမျက်မှန် တပ်ထားပြီး အော်စလို တက္ကစီ ယာဉ်မောင်းများ၏ ယူနီဖောင်းကို ဝတ်ဆင်ထားသည့် ဝန်ကြီးချုပ်သည် ပြည်သူများနှင့် အပြန်အလှန် စကားပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေကို ကားထဲတွင် လျှို့ဝှက်တပ်ဆင်ထားသည့် ကင်မရာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ယခုအခါမှ ဝန်ကြီးချုပ်က ဖော်ထုတ် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အချို့သော ခရီးသည်များကမူ ၎င်းကို မှတ်မိသွားသဖြင့် ရယ်မော နောက်ပြောင်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ခရီးဆုံးတွင် ကားခမယူသည်ကို သိရှိသည့်နောက် ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ကားမောင်းနေမှန်း ခရီးသည်အားလုံး သိရှိခွင့် ရခဲ့ကြသည်။
နော်ဝေးရှိ ကြော်ငြာကုမ္ပဏီ တစ်ခုက ပါဝင်ကူညီသည့် အဆိုပါ အစီအစဉ်၏ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို ဝန်ကြီးချုပ်၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် လွှင့်တင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုသည် စက်တင်ဘာလတွင် ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အကြိုလှုပ်ရှားမှုများတွင်လည်း အသုံးပြုသွားရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ "အော်စလိုမှာ ကျွန်တော်က လူသိများတဲ့သူပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ယာဉ်မောင်း ထိုင်ခုံနဲ့ ကွယ်ထားတော့ ရုတ်တရက် မမှတ်မိကြဘူးလေ။ ပြည်သူတွေ တကယ်တမ်း ဘာတွေတွေးခေါ်နေတယ် ဆိုတာကို သိရဖို့က ကျွန်တော့်အတွက် အရေးကြီးပါတယ်"ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ခရီးသည်များနှင့် ၎င်းတို့ကြား ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွင် တစ်ဦးက ဝန်ကြီးချုပ်အား "ဒီနေရာမှာတော့ ရှင့်အတွေးအခေါ်က စတိုလ်တန်ဘာ့ဂ်နဲ့ တော်တော်တူတာပဲ"ဟု ပြောဆိုသွားသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်က ခရီးသည် တစ်ဦးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍကို ဆွေးနွေးရာ ၎င်းက "အရေးကြီးတာက တကယ်ထူးချွန်တဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို စီစစ် မြှင့်တင်ပေးဖို့ပဲ။ သူတို့အတွက် ပိုကောင်းတဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေ ဖြစ်လာဖို့က လောလောဆယ် အကျပ်တွေ့နေတုန်းပဲ"ဟု အကြံပြုသွားသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်ခမျာ အခြားအချိန်များတွင် VIPယာဉ်တန်းတွင် နောက်ခန်းမှ ခန့်ခန့်ညားညား ထိုင်လိုက်လေ့ ရှိသော်လည်း ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းချိန်တွင် အမှားအယွင်း အနည်းငယ် ရှိသဖြင့် ပြစ်တင်ခံလိုက်ရသေးသည်။
အော်တိုဂီယာ တပ်ဆင်ထားသော တက္ကစီကားတွင် ကလပ်ခ်ျနှင့် ဘရိတ်တို့ အမှတ်မှားနေခြင်းကြောင့် အတန်ငယ် ပြဿနာ ကြုံခဲ့ကြောင်း စတိုလ်တန်ဘာ့ဂ်က ဝန်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းသည် (၈)နှစ်လုံးလုံး ကားမမောင်းဖြစ်ခဲ့ဟုလည်း ဝန်ကြီးချုပ်က ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ စတိုလ်တန်ဘာ့ဂ်သည် နော်ဝေးနိုင်ငံရေး လောကတွင် ထင်ရှားသူ တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အတိုက်အခံတို့၏ ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟု လေ့လာသူများက သုံးသပ်ထားသည်။
သတင်းထောက် တစ်ဦးက ယခုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အရေးနိမ့်ပါက တက္ကစီမောင်းရန် ဆန္ဒရှိမရှိ ကျီစယ်မေးမြန်းခဲ့ပြီး စတိုလ်တန်ဘာ့ဂ်ကလည်း " နော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ တက္ကစီစနစ်က ခရီးသည်တွေအတွက် ကောင်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော် ဝန်ကြီးချုပ် လုပ်နေလို့ပါ။ တက္ကစီ ဒရိုင်ဗာ လုပ်ဖြစ်ရင်တော့ အဲဒီလို မဖြစ်လောက်တော့ဘူး"ဟု ရယ်ရယ်မောမော ဖြေကြားသွားခဲ့သည်။
ဘိုထိုင်အိမ်သာ အသုံးပြုလျှင် ယောက်ကျားလေးများ ကာလသားရောဂါ ကူးစက်နိုင်၍ မိန်းကလေးများ ဆီးလမ်းကြောင်းထဲ ပိုးဝင်နိုင်
အများသုံး ဘိုထိုင်အိမ်သာများသုံးရာတွင် ကျန်းမာရေး သတိပေါ့ဆမှုကြောင့် ကူးစက်မြန်ရောဂါများ ဖြစ်သည့် အရေပြားရောဂါ၊ ကာလသားရောဂါ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ရောဂါ များကူးစက်မှု လွယ်ကူနိုင် ကြောင်း ဆရာဝန်ကြီးများက ပြောကြား လိုက်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဘိုထိုင်အိမ်သာများ မသန့်ရှင်းခြင်းအားဖြင့် ကူးစက်ရောဂါများဖြစ်သော ကာလ ဝမ်းပျက်ရောဂါ၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သောအရည်များမှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ၊ ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ အရေပြားရောဂါ များနှင့် ယင်း အိမ်သာရေများမှတစ်ဆင့် ကူးစက် နိုင်သည်ဟု သိရသည်။
''တော်ရုံတန်ရုံ ဒီက ရောဂါ ကူးနိုင်တယ်ဆိုတာ သိတာပဲ။ ဒါ ပေမဲ့ ဂရုမစိုက်ကြဘူး။ ခုက နေရာ တကာ ဘိုထိုင်ဖြစ်နေပြီ။ အများ သုံးအိမ်သာတွေဆို ပိုဆိုးတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွေက ဘိုထိုင်တွေမှာ ဆို တစ်ခါသုံးဆီ စိမ်စက္ကူတွေ သုံး ကြတယ်''ဟု အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန် ဒေါက်တာဝင်းထွဋ်က ပြောသည်။
အဆိုပါ အများဘိုထိုင်များကို သန့်ရှင်းမှုများ ပြုလုပ်ပေးပါသော်လည်း ရောဂါကူးစက်မှုများမှာ မြန်သည်နှင့် နည်းသည်လောက် သာရှိသည်ဟုသိရပြီး ယင်းကတစ် ဆင့် ကာလသားရောဂါပါ ကူးစက် နိုင်သည်ဟု လည်း သိရသည်။
''အမျိုးသားတွေက ကာလ သားရောဂါ ကူးစက်နိုင်တယ်။ မိန်းကလေးတွေကျတော့လဲ ဆီး လမ်းကြောင်းမှာ ပိုးဝင်နိုင်တယ်။ အဲဒီဆီးလမ်းကြောင်းသာမက ဗက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေရှိတယ် ဆိုတာနဲ့ ကူးစက်နိုင်တာပဲ။ ဆေး ရုံ၊ ဆေးခန်းတွေမှာကျတော့ သူတို့ က ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူ နာတွေအတွက် သီးသန့်အနေနဲ့ လုပ်ပေးထားတယ် ဆိုတာလဲ ပိုးသတ်ဆေးသုံးကြတာပဲ။ အများ သုံးအိမ်သာတွေမှာတော့ အမြဲတမ်းပြု လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဖြစ် နိုင်ရင် မြန်မာအိမ်သာတွေကိုပဲ အသုံးပြုစေချင်တယ်''ဟု သွားရောဂါကု ဒေါက်တာ စိုးထွန်းက ပြောသည်။
''ခုက ဘိုထိုင်တွေပဲ အသုံးများကြတာလေ။ ရောဂါကူးစက် မြန်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိကြတာပဲ။ ဘယ် တတ်နိုင်ပါ့မလဲ။ တစ်သျှူးနဲ့သုတ်ပြီး ထိုင်ဖြစ်တယ်။ အိမ်သာထဲမှာ ဘယ်လောက်ပဲ ဆေးဖျန်းထားပါစေ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကာကွယ်နိုင်မှာလဲ။ ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာဆို ပိုဆိုးတာပေါ့''ဟု တောင် ဒဂုံ ရပ်ကွက်နေ မနုက ပြောသည်။
လူအများစုသည် ဘိုထိုင် အိမ်သာများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးအရ ရောဂါကူးစက်မှု မြန်ကြောင်းကို သိသော်လည်း ကျန်းမာ ရေးအရ စိုးရိမ်မှုမရှိစွာဖြင့် အ သုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အကယ်၍ အများသုံးဘို ထိုင်အိမ်သာများ အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင် မသုံးမီ ထိုင်မည့်ကာဗာ နှင့်အိမ်သာ တွင်းကို ရေများဖြင့် ဆေးပေးခြင်းနှင့် တစ်သျှူးစများကို ဖြန့်ခင်း၍ထိုင်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးမှ အသုံးပြုသင့်သည်ဟု သိရသည်။
By Yangon Time
ခန္ဓာကိုယ်မှ အလိုအလျောက် မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့ ရောဂါဆန်းကို ခံစားနေရသည့် ကလေးငယ်
အသက် ၃လသာရှိသေးတဲ့ အိန္ဒိယကလေးငယ်ပါ။ Spontaneous human combustion လို့ဆိုတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှ အလိုအလျောက် မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့ ရောဂါဆန်းကို ခံစားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မတော်တဆ လို့ ဆိုရအောင်လဲ တစ်ကြိမ်တခါမက ၄ကြိမ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်သဖြင့် လက်ရှိဆေးရုံမှာ အထူးကုများမှ ရောဂါ ဇစ်မြစ်ကို ကုသပေးဖို့ ရှာဖွေနေပါပြီ။
ဒီရောဂါဆန်းကြောင့် ကလေးငယ်ရဲ့ အရေပြား၊ဦးခေါင်းနဲ့ရင်အုပ်တွေမှာ ရရှိထားတဲ့ အပူလောင်ဒဏ်ရာ တွေက မနဲမနောပါပဲ။ ဆရာဝန်တွေကတော့ ကလေးငယ်ရဲ့ ထူးခြားဖြစ်စဉ်ထက် သူ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ လူတွေဆီမှ ထွက်တဲ့(အရက်နံ့) ချွေးနံ့မှတဆင့် လောင်ကျွမ်းမှု ပိုမိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုထား ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ သတင်းအတိအကျကိုတော့ ရှာဖွေနေဆဲပါပဲ။
AkaRy (MM Social Sky)
သီရိဓမ္မာသောကမင်း(သို့) အသောမင်းကြီး၏ သာသနာပြု နယ်မြေထဲတွင် ယနေ့ အာဖဂန် နစ္စတန် ဟုခေါ် သည့် နိုင်ငံသည် လည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့သည်။ “ရက္ခိတမထေရ်မြတ်” အမှူးပြုသည့် မထေရ်မြတ် ငါးပါး သာသနာပြု ခဲ့ရာနယ်မြေဟု ဆက်စပ်သိရှိနိုင်သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ရှေးက ဗုဒ္ဓဘာသာအလွန်ထွန်းကားခဲ့ကြောင်းကိုေ စတီပျက်များ၊ ကျောင်းကန် ပျက်များ၊ ရုပ်ပွားတော်ပျက်များ ကြည့်ရှု့ေ လ့လာခြင်းဖြင့် ငြင်းမရသော သမိုင်း အထောက် အထား တို့ရှိခဲ့ သည်။
အေဒီ (၅၇၀)တွင် “ဟဂျရတ်မုဟမ္မာဒ်” ပေါ်လာပြီးနောက် တိုင်းပြည် အများအပြားကို စစ်ရေးဖြင့် လည်းကောင်း၊ လူမျိုး ပွား၍လည်းကောင်း အစ္စလာမ်ဘာသာပြန့်ပွားအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသော အာရပ် မွတ်စ လင် တို့သည် အေဒီ (၆-ရာစု မှ ၇-ရာစု)အတွင်းတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်ကို
( အေဒီ ၆၀၀ ) အာရပ်မူဆလင်များသည် ပါရှားကိုအောင်နိုင်ပြီး နောက်ဘက် တားရီးယားဒေသ ကိုဆက် လက်တိုက် ခိုက်ပြီး ဗုဒ္စဘာသာထွန်းကားရာေ ဘ်ာလ်ကာဒေသ ( Balka )သို.ပါ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အေဒီ (၇) ရာစုတွင် အာဖဂန်သို. မူဆလင်များစတင်ရောက်ရှိလာပြီး (၁၀)ရာစုသို.ရောက်သောအခါ
တစ်နိုင်ငံလုံးနီးပါး အစ္စလမ်ဘာသာ သို.ရောက်ရှိခဲ.သည် ။ (၁၁) ရာစု တွင်မူ ဗုဒ္စဘာသာသည် အာဖဂန် နစ္စတန်မှ လုံးဝ ချုပ်ငြိမ်းပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည် ။
များပြားလှသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ၊ စေတီပုထိုးများနှင့် ဘုရားကျောင်းကန်များကို ဖျက်စီးခဲ့သည့်အနက် မျက်မှောက်ခေတ်ကာလမကြာသေးမှီက နောက်ဆုံးဖျက်စီးခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ
၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁၂ ရက်နေ့ကား ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တို့၏ မျက်ရည်ပေါင်းများစွာ မြေခခဲ့ရသော နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ ကုလသမ္မဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် “ကိုဖီအာနန်” ဆောင်ရွတ်နေ စဉ် ကာလ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် မွတ်စလင်လူမျိုး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အစွန်းရောက် စစ်သွေးကြွများ အုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလ
အာဖဂန်နိုင်ငံ၊ ဘာမီယန်မြို့၌ သဲကျောက်နံရံကြီးများတွင် ထွင်းထုပူဇော် ထားသော နှစ်ပေါင်း (၂၀၀၀)ကျော် သက်တမ်းရှိသည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရပ်တော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးများအား “မူလစ်မိုဟာမတ်အိုမာ” ခေါင်းေ ဆာင်သည့် မွတ်စလင်စစ်သွေးကြွများက ဖျက်စီးရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က မူလစ်မိုဟာမတ်အိုမာ ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ -
“ဒီရုပ်တုတွေဟာ အစ္စလာမ်မြေပေါ်မှာရှိနေတာဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ တားမြစ်ချက်ကို ချိုးဖောက်စော် ကားတာပဲ .. ဒီရုပ်တုတွေဟာ မှားယွင်းတဲ့ အယူဝါဒကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အတွက် ဖျက်စီး ရမယ့် စာရင်း ထဲမှာ ပါဝင်တယ် .. ဒီရုပ်တုတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ နောက်နောင်ကိုးကွယ်ခွင့်မရအောင်
ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံများ၊ ကုလသမ္မဂ၊ ကမ္ဘာ့ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် UNESCO (ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့) များ တားမြစ် ကန့်ကွက်သည့် ကြားမှပင် ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁၂ရက်နေ့တွင် ပေ(၃၀၀)ခန့်မြင့်သည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးများကို စနစ်တကျ မိုင်းဆင်၍လည်းကောင်း၊
ဒိုင်းနမိုက်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ လေယာဉ်ပစ်အမြှောက်များ၊ ဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်ခတ်ဖျက်စီးခဲ့သည်။ များစွာသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှုကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြရသည်။
ကုလအတွင်းရေးမှူး ကိုဖီအာနန်က -
“အစ္စလာမ်အမည်ခံပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှအကျိုးမရှိစေသည့် လုပ်ရပ်ကို သူတို့လုပ်နေကြတယ်..ဒီလုပ်ရပ်ကို ကမ္ဘာ့အရပ်အသီးသီးက ဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို ကျုပ်ပြောရဲတယ်” ဟု ဆိုခဲ့သော်လည်း မည်သည့် အစ္စလာမ်နိုင်ငံများကမှကန့်ကွက်ပြောဆိုခြင်း မရှိခဲ့ချေ။
အမှန်မှာမူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ “ကုအာရ်”ကျမ်းပါ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ရုပ်တုကိုးကွယ်သည့် ဘသာဝင် များအား ရန်သူများ အဖြစ် ရည်ညွှန်းထားသည်ဖြစ်ရာ ငြိမ်းချမ်းသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် တို့၏ အနိုင်ကျင့်စော်ကားရာ ဘာသာအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များအား ဖျက်စီးအပြီး ညအချိန်သို့ရောက်သော် အပျက်အစီးများ အပေါ်၌ ကျမ်းစာ ရွတ်ဖတ် ၍ အောင်ပွဲခံကြ၏။
အဆိုပါ ဘာမီယန်ဒေသရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးများ ဖျက်စီးခံရသည့်ပုံကို CNN သတင်း ဌာနအပါအ၀င် ကမ္ဘာ့သတင်းဌာနများမှ ထုတ်လွှင့်ပြသသောအခါ မြန်မာအပါအ၀င်
ယိုးဒယား၊ သီရိလကာင်္ စသောကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျခဲ့ကြရသည်။
ထည်ဝါခံ့ညားခဲ့သည့် ရပ်တော်မူဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များမှာ ပြိုပျက်နေသော အပိုင်းအစများ၊ ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော် ဦးခေါင်းပျက်များ နေရာအနှံ့ပျံ့ကျဲနေပုံကို ငိုကြွေးရင်းဖြင့် ကြည့်ရှု့နေခဲ့ရသည်။
မည်သူမှမတတ်နိုင်၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ ကြားဝင်ညှိနှိုင်း၍မရ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တို့၏ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုများစွာထဲမှ နောက်အကျဆုံးေ ချမှုန်းစော်ကားမှုဖြင့် အဆိုပါ ၂၀၀၁ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁၂ရက်နေ့ကား ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ မျက်ရည်ပေါင်းများစွာ မြေကျခဲ့ရခြင်းဖြင့် အာဖဂန်နစ္စတန်မြေပေါ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာအငွေ့အသက် အပြီးတိုင်ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရလေသည်။
အာကာသအတွင်းရှိ အဖိုးတန် ဓာတ်သတ္တုများကို NASA ထောက်လှမ်းမည်
အမေရိကန် အမျိုးသား အာကာသ အေဂျင်စီ (NASA)က အာကာသအတွင်းရှိ အဖိုးတန် ဓာတ်သတ္တုများကို ရယူနိုင်ရန် ထောက်လှမ်းမှု ပြုလုပ်သွားမည်ဟု အတည်ပြုခဲ့သည်။ OSIRIS-REx အမည်ရှိ ထောက်လှမ်းရေး အာကာသယာဉ်ကို (၂၀၁၆)ခုနှစ်တွင် လွှတ်တင်သွားရန် NASAက ရည်ရွယ်ထားပြီး ယင်းသည် ဘန်နူ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားထံသို့ (၂၀၁၈)ခုနှစ်တွင် အခြေချနိုင်မည်ဟု ပညာရှင်များက မျှော်လင့်ထားသည်။ ဘန်နူ၏ မျက်နှာပြင်တွင် အဖိုးတန် သတ္တုသိုက်များ ရှိနေမည်ဟု ယုံကြည်ထားသည်။ NASA၏ အနာဂတ် ရည်မှန်းချက် တစ်ခုဖြစ်သည့် အာကာသ မိုင်းတူးလုပ်ငန်း၏ အစပြုမှုဖြစ်သော ခရီးစဉ်ကို (၂၀၁၆)တွင် အကောင်အထည် ဖော်မည်ဟု အေဂျင်စီက ကြေညာသည်။
အဆိုပါ ခရီးစဉ်သည် သိပ္ပံပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် အတွက်ရော၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှားပါးလှသည့် သတ္တုများကို လူသားများအတွက် ရယူနိုင်ရန် အတွက်ပါ ကောင်းကျိုး သက်ရောက်စေမည်ဟု NASAမှ ပညာရှင်များက မျှော်လင့်ထားသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သတ္တုသိုက် အရင်းအမြစ်များ တစ်စထက်တစ်စ လျော့နည်း ဆုတ်ယုတ်လာသလို သဘာဝ သယံဇာတများ ရယူရေးအတွက် နိုင်ငံများကြား ပဋိပက္ခများ ကြီးထွားလာသည့် အခြေအနေကို ယခုနည်းလမ်းဖြင့် ထွက်ပေါက်ရှာနိုင်ရန် သုတေသီများက မျှော်လင့်ထားသည်။
အာကာသထဲတွင် မျောလွင့်နေသည့် ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများပေါ်၌ သတ္တုရိုင်းသိုက်များ ပေါကြွယ်ဝစွာ ရှိနေသည်ဟု သုတေသီများက ယုံကြည်ထားသည်။ သံနှင့် ပလက်တီနမ်ကဲ့သို့ သတ္တုရိုင်းများသည် လူသားများ၏ ကောင်းကျိုးအတွက် ကြွယ်ကြွယ်ဝဝ အသုံးချနိုင်လောက်သည့် ရင်းမြစ်များ အနေဖြင့် ယင်းဂြိုဟ်သိမ်များပေါ်၌ ခိုအောင်းလျှက် ရှိသည်ဟု NASAက ဆိုသည်။ "(၁၀)မီတာလောက်ပဲရှိတဲ့ ဂြိုဟ်သိမ် သေးသေးလေးလောက်ကို S-Typeလို့ အမှတ်သညာ ပြုပါတယ်။ အဲဒီလို S-Type ဂြိုဟ်သိမ်လေး တစ်ခုပေါ်မှာတင် သတ္တုပမာဏ ပေါင်ချိန် (၁၄၃၃၀၀၀)လောက် ရှိတတ်တယ်။ အဲဒီထဲမှာ ပလက်တီနမ်နဲ့ ရွှေလို အဖိုးတန် သတ္တုတွေက ပေါင်ချိန် (၁၁၀)လောက် ပါဝင်နေတတ်တယ်"ဟု အရီဇိုးနား တက္ကသိုလ်မှ ပရော်ဖက်ဆာ ဒန်တီလော်ရက်တာက ရှင်းပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် NASA၏ OSIRIS-REx ပရောဂျက်တွင် ဦးဆောင် စုံစမ်းရေး ပညာရှင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
NASAအတွက် အဓိက ပြဿနာမှာ ဂြိုဟ်သိမ်များရှိ သတ္တုသိုက်များကို တူးဖော် ရယူရာတွင် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ၊ သို့မဟုတ် ဘီလျံနှင့်ချီ ကုန်ကျမည့် အာကာသစခန်းများ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အာကာသထဲတွင် သတ္တုသိုက်များ တူးဖော်ရာ၌ အတွေ့အကြုံ၊ မြေပုံစနစ်နှင့် သတ္တုသိုက် အမျိုးအစား ခွဲခြားနိုင်စွမ်းတို့ အားနည်း ချို့တဲ့နေဆဲ ဖြစ်သည်။ OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security and Regolith Explorer)သည် လိုအပ်သော အတွေ့အကြုံပိုင်းကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မည့် ခြေလှမ်းဟု NASAက ယူဆထားသည်။
အဆိုပါ အာကာသယာဉ်ကို (၂၀၁၆)ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် လွှတ်တင်ပြီး ဘန်နူ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ (၂၀၁၈)ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ဆင်းသက်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ ထို့နောက် ဂြိုဟ်သိမ် မျက်နှာပြင်ပေါ်မှ သတ္တု နမူနာများကို ရယူပြီး ကမ္ဘာမြေသို့ ပြန်လာမည်ဟု သိရသည်။ ယမန်နှစ်က Google ကုမ္ပဏီနှင့် ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ဂျိမ်းစ်ကင်မရွန်တို့က ကူညီထောက်ပံ့သည့် သိပ္ပံပညာရှင် အဖွဲ့တစ်ခုက မိမိတို့သည် ဂြိုဟ်သိမ်များပေါ်မှ သတ္တုသိုက်များကို တူးယူနိုင်ရန် ကြိုးစားနေကြောင်း ကြေညာခဲ့ဖူးသည်။ NASAမှ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် လာမည့် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုအတွင်း အဆိုပါ ရည်မှန်းချက် လက်တွေ့ ဖြစ်မြောက်လာမည်ဟု ယုံကြည်နေကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
နှိပ်စက်မှုဒဏ်မခံနိုင်၍ ကေအိုင်အေစစ်သားအဖြစ် ထွက်ဆိုခဲ့ဟု ဦးလထော်ဘရန်ရှောင် ဆို
ကေအိုင်အေ စစ်သားအဖြစ် ဖမ်းဆီးကာ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်ခံရပြီးနောက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသော ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်က ၎င်းအနေနှင့် စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ (စ.ရ.ဖ) တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ နှိပ်စက်မှုဒဏ်ကို မခံနိုင်၍ တရားရုံးတွင် ကေအိုင်အေစစ်သားအဖြစ် ထွက်ဆိုခဲ့ရသည်ဟု ပြောကြားသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့ ဂျန်မိုင်ကောင်း နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း ပြုလုပ်သော လူထုရှင်းလင်းပွဲ၌ ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်က ၎င်းအနေနှင့် ကေအိုင်အေစစ်သားအဖြစ် ထိန်းသိမ်းခံနေရစဉ်အတွင်း စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဓားမြှောင်ကို မီးကင်ကာ ပါး၊ ဝမ်းဗိုက်နှင့် ချက်နေရာများတွင်ကပ်၍ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း၊ ပေါင်တွင် ဓားမြှောင်ဖြင့် ထိုးကာစစ်ဆေး မေးမြန်းခြင်း၊ ခြေသလုံးများအား ဝါးလုံးနှင့် ကြိတ်ကာ ကေအိုင်အေစစ်သားအဖြစ် ဝန်ခံ ခိုင်းခြင်းများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ တရားရုံး၌ ဖြောင့်ချက်ပေးရသော အခါတွင်လည်း စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ၎င်း၏ကိုယ်ပေါ်၌ အသံဖမ်းစက်ကို တပ်ဆင် ပေးထားသဖြင့် ၎င်းတို့ ထွက်ဆိုခိုင်းသည့်အတိုင်း ထွက်ဆိုခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“အစကတော့ ကျွန်တော့်ကို ကေအိုင်အေ ဗိုလ်ကြီးဆိုပြီး ဝန်ခံခိုင်းတယ်။ကျွန်တော်က မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းတယ်။ နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ကျွန်တော်ကို နှိပ်စက်ပြီး ဝန်ခံခိုင်းတာ၊ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်လည်း မခံနိုင်တော့လို့ စ.ရ.ဖ များပြောခိုင်းသလို သုံးရစ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်ရတယ်” ဟု ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်က ဆိုသည်။
ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်မှာ စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ နှိပ်စက်စေခိုင်းမှုဒဏ်ကို မခံနိုင်၍ ကေအိုင်အေ စစ်သားအဖြစ် ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ စ.ရ.ဖ များဘက်မှ အခြား မည့်သည့် အထောက်အထားမျှ မပြနိုင်ဘဲ ၎င်းတို့ဘက်မှ တင်ပြသောသက်သေ အထောက်အထားများကို လျစ်လျူရှုခဲ့ကြောင်း၊ ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်သည် ကေအိုင်အေစစ်သား လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း၊ ကေအိုင်အို အဖွဲ့အစည်းနှင့် မည်သို့မျှ မပတ်သက်ခဲ့ကြောင်း ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်မှ အသင်းတော်လူကြီးများက တူညီစွာ ပြောကြားသည်။
ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်သည် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းအပေါ်တွင် ချမှတ်ခဲ့သော အပြစ်ကို ပယ်ဖျက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် အယူခံဝင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ခရိုင်တရားရုံးတော်တွင် အယူခံဝင်ထားမှုမှာ ပလပ်ခံခဲ့ရသဖြင့် ကချင်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်သို့ ဆက်လက် အယူခံဝင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ ဦးဂျီမာခါး ဆိုသည်။
ယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့သော လူထုရှင်းလင်းပွဲတွင် ကာယကံရှင် ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ဇေညွယ်၊ ရှေ့နေ ဦးဂျီမားခါး၊ ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်မှ အသင်းတော်လူကြီးများက ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ကြပြီး ပရိသတ် ၁၅၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဗြိတိန်မိန်းကလေး ၂ ဦးကို မွတ်ဆလင် တရားဟောဆရာက အက်ဆစ်ဖြင့်ပက်
ဗြိတိန်မိန်းကလေး ၂ ဦးကို မွတ်ဆလင် တရားဟောဆရာက အက်ဆစ်ဖြင့်ပက် (page 15/world) ဗြိတိန်သူ မိန်းကလေး (၂)ဦးကို အက်ဆစ်ဖြင့် ပက်ခဲ့သည့် မွတ်ဆလင် တရားဟောဆရာ တစ်ဦးအား တန်ဇန်းနီးယား ရဲတပ်ဖွဲ့က သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အယူဝါဒ ပြင်းထန်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် တရားဟောဆရာ ရှိတ်ခ်အစ်ဆာပွန်ဒါ အစ်ဆာနှင့် အပေါင်းအပါ တစ်ဦးသည် အသက်(၁၈)နှစ်သာ ရှိသေးသည့် မိန်းကလေး (၂)ဦးကို တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံ၊ ဇင်ဇီဘာကျွန်းတွင် အက်ဆစ်ဖြင့် ပက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီသုံး အက်ဆစ်သည် ပြင်းထန်လွန်းပြီး မိန်းကလေး နှစ်ဦး၏ အဝတ်အစားများ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာ ဖြစ်သွားသလို အရေပြားများပါ လောင်ကျွမ်းကုန်သည်
အစ်ဆာကို ခြေရာခံ ရှာဖွေသော ရဲများသည် နိုင်ငံ၏မြို့တော် ဒါအက်စ်ဆာလမ် အနီးတွင် ရှာတွေ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က အစ်ဆာအား မီးခုံးဗုံး သေနတ်ကျည်ဖူးဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဟု သိရှိရသည်။ သူငယ်ချင်း နှစ်ဦးဖြစ်သော ကေတီဂီးနှင့် ခရစ္စတီထရပ်တို့သည် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ခြောက်ခြားစရာ ဖြစ်စဉ်အတွင်း လောင်ကျွမ်းဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ဆေးရုံ၌ ကုသမှု ခံယူနေရဆဲ ဖြစ်သည်။ လန်ဒန်ရှိ ဝက်စ်မင်နစ်စတာ ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်များက မိန်းကလေး နှစ်ဦး၏ အခြေအနေသည် စိတ်ချရလောက်အောင် တည်ငြိမ်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း သက်တောင့်သက်သာ အနားယူနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေး နှစ်ဦးသည် တန်ဇန်းနီးယား ကမ်းလွန်တွင် တည်ရှိပြီး တန်ဇန်းနီးယား အစိုးရ လက်အောက်တွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ဒေသအဖြစ် ရပ်တည်နေသော ဇင်ဇီဘာကျွန်းသို့ အားလပ်ရက် အပန်းဖြေ ခရီးစဉ်အဖြစ် သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက် မိန်းကလေး နှစ်ဦးကို မိဘများက ချက်ချင်းလိုလို လန်ဒန်သို့ ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်လာကာ ကုသမှု ခံယူစေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆေးရုံမှ ဆရာဝန် တစ်ဦးက "လူနာတွေဟာ လောလောဆယ် ဆေးရုံမှာ သက်တောင့်သက်သာ အနားယူနေပါတယ်။ သူတို့ကို မိသားစုတွေက တစ်နေကုန် စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးကို ဆက်ပြီး ကုသမှု ပေးနေဆဲပါ"ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဗြိတိန် လွှတ်တော်ရှိ တိုရေးအမတ် ဘီလ်ကက်ရ်ှက နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် တန်ဇန်းနီးယားနှင့် ဇင်ဇီဘာတို့သို့ သွားရောက် လည်ပတ်သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသားများအတွက် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်သင့်ကြောင်း၊ ယခုဖြစ်စဉ်သည် သာမန် ရာဇဝတ်မှု တစ်ခုထက် လွန်ကဲကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးဌာနကလည်း တန်ဇန်းနီးယားသို့ လည်ပတ်မှု လမ်းညွှန် ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာတွင် အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ကို သောကြာနေ့က ရေးသား လွှင့်တင်ခဲ့သည်။ မိန်းကလေး နှစ်ဦး၏ မိသားစုက Twitterတွင် လွှင့်တင်သော ဓာတ်ပုံ၌ အရေပြား၌ ဆိုးရွားသော လောင်ကျွမ်းမှုများကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။
မိန်းကလေး တစ်ဦး၏ ဒဏ်ရာမှာ အခင်းဖြစ်ပွားစဉ် ကူညီသူများက ညစ်ညမ်းသော ရေများ သုံးမိသဖြင့် ပိုးဝင်ပြီး အခြေအနေ ပိုမို ဆိုးရွားခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ ကမ်းခြေ အပန်းဖြေ စခန်းတစ်ခုဖြစ်သော စတုန်းတောင်းတွင် သူငယ်ချင်းများက ပင်လယ်ရေများကိုခပ်ကာ လောင်ကျွမ်းဒဏ်ရာကို ဆေးကြောပေးပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာမူ အိမ်သာထဲမှ ရေများကို အသုံးပြုခဲ့မိခြင်း ဖြစ်သည်။ "အက်ဆစ်ရယ်၊ ဆားငယ်ရေရယ်ဆိုတော့ ရလဒ်က တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကတော့ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့် ဖြစ်ပြီး လျှောက်ပြေးရာက အများသုံး အိမ်သာထဲ ရောက်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ မသန့်ရှင်းတဲ့ ရေတွေကို သုံးလိုက်မိတယ်လေ"ဟု ထရပ်၏ ဖခင်က ဆိုသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့သည် မျက်မြင်သက်သေ (၅)ဦးကို မေးမြန်းခဲ့ပြီး မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးလာသူနှစ်ဦးက မိန်းကလေးများ လမ်းလျှောက်လာစဉ် အက်ဆစ်ဖြင့် ပက်သွားခြင်းဟု ထွက်ဆိုခဲ့ကြသည်။ "မိန်းကလေးတွေနောက်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ လူနှစ်ယောက်က လိုက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အရည်တွေ လောင်းပက်သွားတာပဲ။ ဒါက အက်ဆစ်လို့ ထင်တယ်။ ပြီးတော့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ သူတို့ထွက်ပြေးသွားတယ်"ဟု မျက်မြင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။ မိန်းကလေးများသည် သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ညစာစားရန် လမ်းလျှောက်လာစဉ် ယခုလို ကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
သတင်းများက အစ်ဆာသည် အစွန်းရောက် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည့် အူရမ်ရှိုနှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ အစ်ဆာကို စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး ၎င်း၏ ကြံရာပါနှင့် ပတ်သက်၍ တိတိကျကျ မသိရှိရသေးချေ။ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ ဇင်ဇီဘာကျွန်းသည် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အများစု နေထိုင်ပြီး မိန်းကလေးများက အပန်းဖြေခရီး ထွက်လာရင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆရာမများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
Haswell chip ပါဝင်သည့် Latitude 7000 series Ultrabook များကို Dell မိတ်ဆက်
Posted by drmyochit Tuesday, August 13, 2013, under နည်းပညာ | No comments
Dell ကုမ္ပဏီက Haswell chip များ အသုံးပြုထားသော Latitude7000 series Ultraboook များကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
၁၂.၅ လက်မ E7240 နှင့် ၁၄ လက်မ E7440 တို့တွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု သက်သာသော Intel 1.7 GHz Core i3 CPU ကို အသုံးပြုထားသည်။ ၎င်း Ultrabook များကို အလူမီနီယံ ကိုယ်ထည်နှင့် ပြုလုပ် ထားပြီး အထူမှာ ၀.၈ လက်မသာ ရှိသည်။ ဖုန်ဝင်ခြင်း၊ ရေစိုခြင်းနှင့် ရှော့ခ်ခြင်း တို့ကိုခံနိုင်သည်။ Dell ၏ WiGig Wireless Dock နှင့် WiDi တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။
အဆိုပါ Latitude Ultrabook နှစ်မျိုးတွင် 1,366x768 display နှင့် 4GB RAM တို့ကို အသုံးပြုထားသည်။ တန်ဖိုးမှာ 128GB SSD ပါဝင်သည့် E7240 အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၁၆၉ ကျသင့်မည်
ဖြစ်သည်။ 320GB hard drive ပါဝင်သည့် E7440 အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၀၄၉ သတ်မှတ်ထားသည်။
အတွဲ (၁၄)၊ အမှတ် (၃၁)
မိုးဟေကိုရဲ့ ဓာတ်ပုံကတော့ သိတဲ့အတိုင်းရေလည်လန်းတယ်နော်...
အမျိုးစပ်သော်လဲ သွေးမတူနိုင်ပါဆိုလျှင် အမျိုးမစပ်ပဲ သွေးတူနေတာတွေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုပြောကြလိမ့်မည်။ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော
ကျနော်ပြောချင်တာက ကျနော်တို့နိုင်ငံကလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးနဲ့ သူနဲ့သွးမတူတဲ့ သူ့ ရဲ့ သမီးအကြောင်းကို ပြောချင်တာ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို့ ပြောလိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဆိုတာ
မြန်မာနိုင်ငံသားများသာမက အခြားနိုင်ငံများကပါ လေးစားရသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အစည်း အဝေး လာရောက် သည့် ပုံစံကို ကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဗိုလ်မှူးကြီး ဟီရာအိုကက "အောင်ဆန်း ၀တ်လာ တဲ့ကျေမွနေ တဲ့ စစ်အင်္ကျီအစုပ်ကိုတွေ့ရတော့ ဂျပန်အရာရှိကြီးတွေက သိပ်ကိုလေးစားသွားကြတယ်။
ဒီလိုအ၀တ်အစားယူနီဖောင်းကိုဖြစ်သလိုဝတ်ထားပုံ ကျုပ်တို့ စစ်သားတွေနဲ့ တူနေတယ်။ပြီးတော့အောင် ဆန်းဟာ စကားပြောရာမှာပြောသင့်တာလောက် နည်းနည်းပါးပါးပြောပြီး နှုတ် ဆိတ်နေ တာ ကိုလဲသဘောကျတယ်။ဒီလိုယူနီဖောင်း အစုပ်အပြဲ ၀တ်ထားတာ နဲ့စကား နည်းတာကတော့ ကျုပ်တို့ ဆာမူရိုင်း သူရဲကောင်းတွေရဲ့ အမှတ် လက္ခဏာ တစ်ခုမို့ ဒါတွေကိုကျုပ်တို့ဂျပန်တွေက
အလွန်တန်ဖိုးထားကြတယ်။နောက်ပြီးအောင်ဆန်းဟာမျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ြ့ပ င်းထန်သူဖြစ်တယ်။တိုင်းတစ်ပါးအပေါ်အောက်ကျို့ချင်တဲ့စိတ်၊ ကျွန်ခံချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေလဲရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူး" လို့လေးစားချီးကျူးခံခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂျပန်များထွက်ခွားသွားပြီးတဲ့ နောက် မိတ္ထီလာခန်းမမှာ
သူသည်အလွန်ရိုးသားသည်။သူသည်ပေးခဲ့ပြီးသောကတိအတိုင်းလည်းတည်မည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ကျွန်ုပ်သည်အောင်ဆန်းနှင့် အလုပ်ဖြစ်သည်"
ဟု ပြောဆိုခဲ့ သည်ကိုလဲလေ့လာသိရှိရပါသည်။
အရည်အချင်းများအတိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်ဖခင်နှင့် မည်သည့် အရည်အချင်းများတူညီပါသလဲ။ဆိုလိုချင်တာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်သည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဲ့ သို့ အပြော
သမားမဟုတ်လက်တွေ့ သမား။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ အပြားဟောပြောပွဲတွေလုပ်၊ပြည်သူတွေကို မက်လုံးပေးပြီးစည်းရုံးပွဲတွေလုပ်ပြီး နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဘာတွေများအဖြစ်ရှိအောင်
လုပ်တတ်သည့် တစ်ကိုယ်ကောင်းသမားမဟုတ်။ငယ်ရွယ်စဉ်က နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဗိုလ်ချုပ်မုန်းပါတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားနဲ့
မျိုးချစ်စိတ်ရှိသယောင်ယောင်၊ပြည်သူကိုချစ်သယောင်ယောင် ယောင်ဝါးလုပ်ကာ လူထုခေါင်းဆောင်ဘွဲ့ ခံယူပြီး လေလိုက်ဖြန်းနေသော
ဆိုသည်ကိုဖြုတ်ပြီး စုကြည်မဘ၀ဖြင့် မည်သည့်နေရာတွင်
တစ်ခုပဲမေးချင်ပါသည်။ ခင်ဗျားက နေရာရမှ နိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်မှာ
နိုင်တော့ဆုပေးရတဲ့သူတွေလဲနောက်ထပ်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တပ်ရမလဲဆိုတာ အင်မတန်စဉ်းစားရခက်နေကြပါပြီ။ ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတာ
လေ မဟုတ်ပါ။အမှန်တကယ် လက်တွေ့
လုပ်ပေးတာကိုပဲလိုချင်ကြပါသည်။ထို့ ကြောင့် နေရာတကာ လေဖြင့်အလုပ်လုပ်နေသောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြည်သူအတွက် အမှန်တကယ်အကျိုးရှိမည့်လုပ်ငန်းများပြုလုပ်ပေးစေလိုပါသည်
။နေရာတကာတွင် ဖေဖေပြောခဲ့သလိုပဲ ဖေဖေပြောခဲ့သလိုပဲလို့ 
ပြောနေမယ့်အစား ဖေဖေဆိုသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဲ့သို့
သတိပေးမှုတွေကြား အီဂျစ်မှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား
အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ ရာထူးက ဖြုတ်ချခံထားရတဲ့ သမ္မတဟောင်း မိုဟာမက် မော်စီ (Mohamed Morsi) ကို ထောက်ခံ သူတွေ က သူ့ကို ရာထူး ပြန်လည် အပ်နှင်းပေးဖို့ တောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆက်လက် ပြုလုပ်နေကြ ပါတယ်။
ဒါဟာ သူတို့ဖွင့်ထားတဲ့ ဆန္ဒပြ သပိတ်စခန်းတွေကို အစိုးရတပ်တွေ မကြာခင် ၀င်ရောက် ဖြိုခွင်းမယ်လို့ သတိပေး ချက် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကြားက ဆက်လက် ဆန္ဒပြနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာ မော်စီကို စစ်တပ်က ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့မှာ ရာထူးက ဖြုတ်ချလိုက် ပြီးတာကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက် တဲ့ ကိုင်ရိုမြို့က သပိတ်စခန်း ၂ ခုမှာ သီတင်းပတ်တွေနဲ့ချီပြီး စုဝေး ဆန္ဒပြနေကြတာပါ။
တိုင်းပြည်အတွင်း နောက်ထပ် သွေးထွက်သံယိုဖြစ်ပွားမှုတွေ ထပ်မံ ကြုံတွေ့မှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် စစ်တပ်အနေနဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို အင်အားသုံး မဖြိုခွင်းဖို့ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ အာရပ်နိုင်ငံတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကြားဝင် ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ တနင်္လာနေ့လောက်မှာ အစောဆုံးအဖြစ် ဆန္ဒပြစခန်း
တွေကို ၀င်ရောက် ဖြိုခွင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ပြောဆိုထားပေမဲ့လည်း အခုချိန်ထိတော့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က တစုံတရာ အဲဒီလို လုပ်ဆောင်တာ မရှိသေးပါဘူး။
တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အဆုံးသတ်သွားတဲ့ အစ်ဥပုဒ်ရက် ကျော်တာနဲ့ ဆန္ဒပြ သပိတ် စခန်းတွေကို ဖြိုခွင်းသွားမယ်လို့ အီဂျစ်ကြားဖြတ်အစိုးရက အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Call Center က အိမ်တိုင်ရာရောက်လက်မှတ်ပို့ပေးသည့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်ဆောင်ရွက်ပေး
၁၈၇၆ Call Center အနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ် လက်မှတ်များအားမှာယူပါက အိမ်တိုင် ရာရောက် လက်မှတ် ပို့ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်လိုက်ကြောင်း Call Center ၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြား သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်တော်တော်များများအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မူဆယ်၊ ရွှေလီ အစရှိတဲ့ နေရာတွေ အတွက် ခရီးသွား ကားလက်မှတ်တွေကို အိမ်တိုင်ရာရောက်စနစ်နဲ့ မှာယူနိုင်အောင် ဆောင်ရွက် လိုက် တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်း တာဝန်ရှိသူကပြောသည်။ ထိုကဲ့သို့မှာယူရန်အတွက် သတ်မှတ် ဝန်ဆောင် ခကို ပေးချေရမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်ခများမှာ မှာယူသည့်နေရာ အပေါ်မူ တည်ကြောင်း ၁၈၇၆ သို့ခေါ်ဆိုကာ မှာယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဝေပြေး ယာဉ်လိုင်းခရီးစဉ်များအတွက် ကားလက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ကားလက်မှတ် များကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ရယူလိုသည့်ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်လိုပါက ၁၈၇၆ Hot Line ၏ လက်မှတ် ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ လိုင်းခွဲနံပါတ် (၄) ဖြစ်ပြီး ၂၄ နာရီဆက် သွယ်နိုင် မည် ဟုဆိုသည်။ ခရီးစဉ်လက်မှတ်များကို အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ မှာယူနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းအပြင် ၁၈၇၅ Hot Line တွင်လည်း ဝန်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခု ထပ်တိုး ထားကြောင်း သိရသည်။
၎င်းဝန်ဆောင်မှုမှာ အလုပ်ရှာဖွေလိုသော ဝန်ထမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းရှာဖွေသော လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက်ဖြစ် ပြီး ၁၈၇၅ HotlLine လိုင်းခွဲ နံပါတ် (၄) သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် အဆိုပါဖုန်းသို့ခေါ်ဆိုကာ အလုပ်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့်လည်း အဆိုပါ ဖုန်းသို့ခေါ်ဆိုကာ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ကုလလူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနား ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ရောက်ရှိနေ
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသော ကင်တားနားကို ဒေသခံအချို့က ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့သို့ သြဂုတ် ၁၂ ရက်က ရောက်ရှိလာသော ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနားအား ဒေသခံများက ကန့်ကွက်ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကင်တားနားသည် သြဂုတ် ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းနှင့် ယင်းမှတစ်ဆင့် ဘူးသီးတောင် အကျဉ်းထောင်သို့ အမြန်ရေယာဉ်ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဥပဒေ အရာရှိချုပ် ဦးလှသိန်းနှင့်အတူ သွားရောက်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ ကင်တားနား ရောက်ရှိလာသည့် နံနက်ပိုင်းတွင် စစ်တွေလေယာဉ်ကွင်း ထွက်ပေါက်အနီး၌ ဒေသခံအချို့က ''ကင်တားနား ထွက်သွား၊ အလိုမရှိ'' ဟူသော စာသားများကို ရေးသားထားသည့် ပိုစတာများကို ကိုင်ဆောင်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
လေယာဉ်ကွင်းအနီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်အပြီး ဘူးသီးတောင်သို့သွားမည့် သင်္ဘောဆိပ် တို့တွင်လည်း ထိုသို့ ငြိမ်သက်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော် ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် ပါဝင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်ညိုအေးက ''ကင်တားနား လာမယ်လို့ ပြောသံကြားတိုင်း၊ ဘင်္ဂါလီတွေက အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်။ ပြဿနာရှာတယ်၊ အငြိမ်မနေဘူး။ ဒါကို သံသယဖြစ်တယ်။ သွေးထိုးလှုံ့ဆော် ပေးနေတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ပြီးတော့ သူ့အစီရင်ခံစာမှာလည်း မျှတခြင်း မရှိဘူးလို့ ယူဆတယ်။ ဒီလိုတာဝန်ကြီးမားတဲ့ လူတစ်ယောက်က တလွဲလုပ်နေရင် ဘင်္ဂါလီတွေက လုံးဝငြိမ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ရခိုင်ပြည် မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာကိုတောင် မလာစေချင်တာပါ။ သူ့ကို ကျွန်မတို့ လက်မခံသလို ရခိုင်ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးကလည်း လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်ထပ် လာရင်လည်း ဒီလိုမျိုး ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေ ပြုလုပ်သွားမှာပါ'' ဟု ပြောကြားသည်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ တစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံနေသည့် ကင်တားနား
ကင်တားနား စစ်တွေဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိစဉ် ဆန္ဒထုတ်ဖော် သူများအနက် ဦးဆောင်သူများတွင် ပါဝင်သည့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်ညိုအေးနှင့် ၁၅ မိနစ်ခန့် ဖောင်တော်တွင်ရပ်ပြီး စကားပြောဆိုခဲ့သည်။ ယင်းသို့ ပြောဆိုရာတွင် ဆန္ဒပြရသည့် အကြောင်းအရင်းကိုလည်း မေးမြန်းခဲ့သည်။
ကင်တားနားက ''ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာက ခင်ဗျားတို့ အခွင့်အရေးသာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို အချိန်မရွေး ပြောလို့ ရတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ရင်ထဲက ခံစားချက် တွေကိုလည်း ကျွန်တော်နားလည်တယ်။ ကျွန်တော်တာဝန်ယူ ထားရတဲ့ အလုပ်ကို ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ပြောချင်တဲ့ စကားတွေကိုလည်း ကျွန်တော် နားထောင်ရမယ်။ အခြားလူတွေ ပြောတဲ့ စကားတွေကိုလည်း ကျွန်တော် နားထောင်ရမယ်။ ကျွန်တော့် အစီရင်ခံစာကိုလည်း သေချာဖတ်ကြည့် စေချင်တယ်'' ဟု ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဥပဒေ အရာရှိချုပ် ဦးလှသိန်း ဦးဆောင်သော ကင်တားနား အဖွဲ့သည် အမြန်ရေယာဉ်ဖြင့် ဘူးသီးတောင်သို့ သွားရောက်ခဲ့ရာ ဘူးသီးတောင်တွင်လည်း ဒေသခံများက ပိုစတာများ ကိုင်ဆောင်ကာ စီတန်းဆန္ဒ ထုတ်ဖော်မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကင်တားနားသည် ဘူးသီးတောင် အကျဉ်းထောင်ရှိ ဘင်္ဂါလီ အကျဉ်းသား အချို့ကို သီးခြားတွေ့ဆုံ စကားပြောခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မနက်ဖြန်တွင် စစ်တွေမြို့တွင်းရှိ ဘင်္ဂါလီရပ်ကွက် တစ်ခုဖြစ်သော အင်ပါလာ ရပ်ကွက်သို့ သွားရောက်ကာ ဘင်္ဂါလီ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် အစိုးရအဖွဲ့၊ ဒေသခံလူမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့မိမြို့ဖများနှင့် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကူးစက်တတ်သော ရောဂါများနှင့် ပတ်သက်၍ စာရင်းအတိအကျရရန် စတင်စစ်တမ်း ကောက်မည်
ဦးလှထွန်း မေတ္တာရိပ်မွန် (ကင်ဆာ) ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဝေဒနာရှင်များအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-အိသဉ္ဇာကျော်)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါများနှင့် ပတ်သက်၍ စနစ်တကျ စစ်တမ်းကောက်ယူ ထားမှုများ မရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ် အောက်တိုဘာမှ စတင်ကာ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် စစ်တမ်းကောက်ယူ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ကောက်ယူရာတွင် တောင်တန်းဒေသ၊ အပူပိုင်းဒေသ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသနှင့် ကမ်းရိုးတန်း ဒေသဟူ၍ အပိုင်းလေးပိုင်းခွဲကာ ယင်းဒေသများရှိ ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ နေထိုင်စားသောက်မှု ပုံစံများကို မေးခွန်းများ မေးမြန်း၍ သော်လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေးသုံး စက်ကိရိယာများ အသုံးပြု၍ သော်လည်းကောင်း စစ်တမ်းကောက်ယူ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်တမ်းကောက်ယူ မှုများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆီးချိုသွေးချိုအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ဆီးချို သွေးချိုအဖွဲ့နှင့် ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဆီးချိုသွေးချို ကာကွယ်ရေး စီမံချက်တို့ ပူးပေါင်း၍ လူဦးရေ တစ်သောင်း ၀န်းကျင်ခန့်အား စစ်တမ်းကောက်ယူမည် ဖြစ်သည်။
''စစ်တမ်းကောက်တဲ့ အခါမှာ မကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ဆီးချိုသွေးချို၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း၊ လေဖြတ်၊ သွေးတိုးကင်ဆာတွေ ပါတယ်။ နာတာရှည် အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့တဲ့ ရောဂါတွေကို ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ ဆိုတာကို ကျေးလက်တွေထိ ကွင်းဆင်း ကောက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုကောက်ခံတဲ့ အခါမှာလည်း နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီ ကောက်ယူသွားမယ်။ ဒီလိုမကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါဖြစ်နှုန်းတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေလဲ ဆိုတာကို စာရင်းအတိအကျ ရနိုင်ဖို့အတွက် ကောက်ယူသွားမှာပါ။ အဲဒီလို ကောက်ယူတာတွေကတော့ ခြောက်လလောက်ကြာမယ်'' ဟု မကွေးဆေးတက္ကသိုလ် (ဆေးပညာဌာန) မှ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာကိုကိုက ပြောကြားသည်။
ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါကြောင့် လူသေဆုံးမှုသည် ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ခန့်ရှိပြီး ကူးစက်ခြင်း မရှိသည့် ရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှုသည် ရာခိုင်နှုန်း ၃၀ ခန့်သာ ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် ဖြစ်ပွားမှု အချိုးမှာ ၅၀း၅၀ ဖြစ်နေကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖေသက်ခင်၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ထို့အပြင် မြို့ကြီးပြကြီး ဆေးရုံအဆင့်များတွင် သာမက မြို့နယ်တိုက်နယ် ဆေးရုံများတွင်လည်း မကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါများကြောင့် ပြသသည့် လူနာများမှာ ပိုမိုများပြားနေကြောင်း၊ မကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါများအနက် အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါများမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် ဖြစ်သည့် အရိုးအကြောအဆစ်၊ ဆီးချိုသွေးချို၊ ကင်ဆာဆိုင်ရာ ရောဂါများ၊ အ၀လွန်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ သွေးတွင်း အဆီများခြင်း၊ မျိုးပွားဟော်မုန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ရောဂါများ စသည်တို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါများကြောင့် လူတစ်သိန်းတွင် တစ်ထောင်ကျော် သေဆုံးနေကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုနှစ် ဇွန်လအထိ အင်တာနက် သုံးစွဲသူဦးရေ ၁၁ သိန်းကျော် ရှိပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် သုံးစွဲသည့် ဦးရေမှာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိလာကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ သတင်းရရှိသည်။ ပြည်တွင်း၌ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ များပြားလာပြီး ယခုအခါ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် အင်တာနက် လျှောက်ထားမှုများမှာ လွယ်ကူပြီး တစ်သောင်းကျပ်သာ ကျသင့်ခြင်းကြောင့် လျှောက်ထားသူ ပိုမိုတိုးလာရာ နောက်လများတွင် ယခု အင်တာနက် သုံးစွဲသူထက် သိသိသာသာ ထပ်မံ တိုးလာဖွယ်ရှိကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ အင်ဂျင်နီယာချုပ် တစ်ဦးက ပြောသည်။ “အခု ဇွန်လကုန်အထိ နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ စာရင်းအရဆိုရင် လူဦးရေ ၁၁ သိန်းကျော်လောက်ရှိပြီ။ ဒါတောင် ဇူလိုင်လက စာရင်း မရသေးဘူး။ ပိုတော့ များလာမှာပါ” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
Apple လုပ်ခဲ့တဲ့ ကွယ်လွန်သူစတိဗ်ဂျော့ မကြိုက်တဲ့ အရာများ
Apple ရဲ့လက်ရှိ CEO ဖြစ်သူ Mr.Tim Cook က ကွယ်လွန် သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ CEO စတိဗ်ဂျော့ အကြောင်းကို “မကွယ်လွန်ခင် ရက် အထိ သူဟာ အလုပ်ကို ပြတ်ပြတ် သားသား လုပ်ပြီး သူ့ပတ်ဝန်းကျင် (ဆန့်ကျင်ဘက်) တွေကိုပါ သူ့ဘက် ပါလာအောင် စည်းရုံး နိုင်ခဲ့ သူပါ” လို့ ဒီနှစ် အစော ပိုင်းမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအတွေးဟာ စတိဗ်ရဲ့ သူ့စိတ်သူ ပြောင်းလဲ ပစ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားကို ဆိုထားတာပါ။ ဒါ့အပြင် စတိဗ်ဟာသူ့ရဲ့ အတွေး အခေါ်တွေကို ဆက်စပ် စဉ်းစားပြီး Apple အတွက် ပြောင်မြောက် ကောင်းမွန်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ဖန်တီး ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း CEO စတိဗ်ဂျော့ ကွယ်လွန် သွားပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း Apple မှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ကြည့်လိုက် ရအောင်ဗျာ။
၁။ စတိဗ်ဂျော့ဟာ နေ့စဉ်ဘ၀ထဲက ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆင်တူတဲ့ ပုံစံတွေကို ဖန်တီးရတာ တကယ်ပဲ နှစ်သက်သူ တစ်ယောက်ပါ။ iOS ရဲ့ Game Center ထဲမှာရှိတဲ့ Fake Vegas Gaming Table ဟာလည်း သူကြိုက်ခဲ့တဲ့ ဂိမ်းတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကွယ်လွန် သွားပြီးတော့ Apple ဟာအဲဒါတွေ အားလုံးကို ဖျက်သိမ်း ခဲ့ပါတယ်။ Flatter-Look ပုံစံမျိုး ဖန်တီးပြီး လက်တွေ့ဘ၀ကို တုပထားတဲ့ Graphics တွေ၊ Animations တွေကိုလည်း ဖယ်ရှား ခဲ့ပါတယ်။
၂။ ထောင့်စွန်းတွေ လုံးဝန်းနေတဲ့ ထောင့်မှန် စတုဂံမျိုး ကိုလည်း စတိဗ်ဂျော့က နှစ်သက် ခဲ့ပါတယ်။ Apple မှာစတိဗ် စတင် လုပ်ကိုင်ခဲ့စဉ် အချိန်တုန်းက ဘာကြောင့် ဒီလို ထောင့်မှန် စတုဂံမျိုး ရွေးချယ် ရလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး မေးခံ ခဲ့ရ ဖူးပါတယ်။ အဲဒီ မေးတဲ့ လူကို စတိဗ်က ရွဲ့ပြီး နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ထောင့် လုံးဝန်းနေတဲ့ ထောင့်မှန် စတုဂံတွေ အများကြီး ရှိတယ် ဆိုတာကို ပြဖို့ Block တစ်ခု ပေါ်မှာတောင် လမ်းလျှောက် ခဲ့ပါ သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ Apple ရဲ့ iPhone Software အသစ်မှာ စတိဗ် မကြိုက်ခဲ့တဲ့ စက်ဝိုင်း ပုံလေး တွေကို တွေ့နေရ ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ စတိဗ်ဂျော့ဟာ Tablet အသေးတွေကို နှစ်သစ်လှသူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Apple ကတော့ iPad Mini ကို ပွဲထုတ် မိတ်ဆက် ခဲ့ပါတယ်။ ဂျော့က ၁၀ လက်မထက် ငယ်တဲ့ Tablet တွဟော App တွေသုံးရ အဆင်မပြေစေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အောင်မြင်မှာ မဟုတ် ဘူးလို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကုမ္ပဏီတွေ ရောင်းမယ့် လူသုံးများ Tablet တွေဟာ ဖန်လွှာ မျက်နှာပြင် တစ်ခု ပါဝင်သင့် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း Apple ဟာ iPad Mini ကို ပွဲထုတ်ဖြန့်ချိ လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ မယုံနိုင်လောက်အောင် လူကြိုက် များခဲ့ ပါတယ်။
၄။ စတိဗ်ဂျော့ရှိတုန်းက Appleဟာ ငွေကြေး ပမာဏ အများကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ ငွေကြေး ရင်းနှီး ထားသူတွေက အစုစပ် အကျိုး အမြတ် အတွက် တောင်းဆို ခဲ့ကြသော်လည်း ဂျော့ကတော့ မပေး ခဲ့ပါဘူး။ သူ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် Tim Cook ကတော့ အဆိုပါ ရှယ်ယာရှင် တွေကို အစုပေါ် အကျိုး အမြတ်တွေ အများကြီး ရှင်းပေး ခဲ့ပါတယ်။
၅။ Apple ရဲ့ Apple’s Map ဟာလည်း တကယ့်ကို အန္တာရာယ် ရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါ Product ထွက်လာ ပြီးနောက် ဂျော့ဟာ MobileMe Team ကိုသွားပြီး သောင်းကျန်း ခဲ့ပါတယ်။ စိတ် အလို မကျလည်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဲဒီ Mapရဲ့ Managerကို ရာထူးမှ ဖြုတ်ပစ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Maps အတွက်အဓိက တာဝန် ရှိသူလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ Scott Forstall ကိုလည်း ပယ်ရှား ခဲ့ပေမယ့် Tim Cook ကတော့ အဆိုပါ Mapsကို ဆက်လက် ကိုင်တွယ် သွားမယ် ဆိုတာ အတည်ပြု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
၆။ စတိဗ်ဂျော့ လူသိထင်ရှား အလှူ လုပ်တယ်လို့ တစ်ခါမှ မကြားမိခဲ့ပါဘူး။ သူ ကွယ်လွန် ပြီးနောက်တော့ Tim Cook ဟာ Appleကို အလုပ် သမားတွေအား ထောက်ပံ့ကြေးတွေ ပေးအပ် ခြင်းဖြင့် နွေးထွေးတဲ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု အဖြစ်ဖ န်တီး ခဲ့ပါတယ်။
၇။ ပြီးတော့လည်း သူထုတ်ခဲ့တဲ့ Siriဟာ “Bad Product” ပါတဲ့။ စတိဗ် တစ်ယောက် အလို မကျ ဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်။ Siriဟာ ကောင်းကောင်းလည်း အလုပ် မလုပ်ပါဘူး။ “Extra Junk” သာဖြစ်တယ် လို့တောင် ပြောခံ ခဲ့ရ ပါတယ်။
၈။ Stebe Jobsဟာ ကြော်ငြာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နားပါးသူ၊ ထူးချွန်သူ တစ်ယောက်ပါ။ Apple အတွက် ထူးဆန်းပြောင်မြောက်တဲ့၊ ဂန္တ၀င် တွင်တဲ့ ကြော်ငြာတွေကိုလည်း ဖန်တီး ခဲ့ပါတယ်။ သူသေ ဆုံးတော့ Appleရဲ့ Marketing တောင် ရပ်ဆိုင်း ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ Apple အတွက် ကြော်ငြာတွေကို ဖန်တီးခဲ့ ပေမယ့် ကောင်းမွန်တဲ့ လက်ရာ တွေတော့ မဖြစ် ခဲ့ပါဘူး။
၉။ နောက် တစ်ခုကတော့ Appleကို လူတွေ နားလည်လ က်ခံ ထားတဲ့ ပုံစံဟာ တစ်ချိန်က သူတို့ ရင်ထဲမှာ ရှိခဲ့တဲ့ Appleကိုတော့ မမီတော့ ပါဘူးတဲ့။ လေူတွ ကတော့ Appleကို ချစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Appleဟာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး Brand တစ်ခု အဖြစ်တော့ မူပိုင် မရပ်တည် နိုင်တော့ပါဘူး။ လက်ရှိ CEO Tim Cook ဟာလည်း Apple နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်း တွေကို ကောင်းကောင်း ထိန်းကျောင်းဖို့ ပါရမီ ရှိတဲ့ လူလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက Tim Cook ရဲ့ အပြစ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ဘယ်သူ ကမှ စတိဗ်ဂျော့လို Media တွေကို နားလည်ပြီး Apple နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို ထိန်းကျောင်းဖို့ ပါရမီရှင်မှ မဟုတ် တာပဲဗျာ။
အိန်္ဒိယ နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း မာတာရီ ကျေးရွာ အနီးတွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ် အတွင်းက ရထား တိုက်မိမှုကြောင့် ဆင်တစ်ကောင် သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီးနောက် ဆင် ၁၅ ကောင်ခန့် ပါဝင်သော ဆင်အုပ် တစ်အုပ်သည် ၎င်းတို့၏ အပေါင်း အဖော်ဆင် သေဆုံးခဲ့သည့် ရွာသို့ လာရောက်၍ ကလဲ့စား ချေသည့် အနေဖြင့် နေအိမ်များကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဆင်အုပ်သည် အနီးအနားရှိ နေအိမ်များကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး စာသင်ကျောင်း၏ အစိတ်အပိုင်း အချို့ကိုလည်း ဖျက်ဆီး ခဲ့ကြောင်းနှင့် ဆင်အုပ်ကို ဒေသခံ များက ဗျောက်အိုးများ အသုံးပြု၍ အုပ်စုခွဲ နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆင် ၁၅ ကောင်ခန့် ပါဝင်သော အဆိုပါ ဆင်အုပ်သည် ၎င်းတို့၏ အပေါင်း အဖော်ဆင် သေဆုံးခဲ့သည့် နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဆင်များသည် ယင်းနေရာမှ ရက်ပေါင်းများစွာ ဖယ်ရှားခြင်း မရှိသည့် အတွက် ရထား ခရီးစဉ်များ ရပ်တန့် ခဲ့ရကြောင်း Times of India တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဆင်များသည် ၎င်းတို့၏ အပေါင်းအဖော် ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့သည်ဟု ယူဆပြီး ၎င်းကို ကယ်ဆယ်ရန် အတွက် အခင်း ဖြစ်ပွားရာ နေရာသို့ ပြန်လာရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆင်တစ်ကောင် သဘာဝ အတိုင်း သေဆုံး ခဲ့ပါက ၎င်း၏ အပေါင်းအဖော် ဆင်များသည် သေဆုံးသည့် ဆင်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို သစ်ကိုင်းများဖြင့် ဖုံးအုပ်လေ့ ရှိကြောင်း တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဒီအက်ခ်ဆရီဖက်စ်တာဗာက Times of India သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
နည်းပညာ ဝက်ဘ်ဆိုက်များထံ သတင်းပေါက်ကြားလာသည့် မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာ မှတ်တမ်း တစ်ခုအရ Samsung ကုမ္ပဏီသည် ကိုယ်ပိုင် စမတ်လက်ပတ်နာရီ (Smart Watch) တစ်ခုကို တီထွင် ဖန်တီး နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ် သိရှိလာခဲ့သည်။ တောင်ကိုရီးယား နည်းပညာ လုပ်ငန်းစုကြီးသည် အဆိုပါ စမတ်နာရီအတွက် အလုံးစုံ တီထွင်ပြီးမြောက်ပြီး ဖြစ်သည်ဟု ယူဆနိုင်ပြီး ယင်းအတွက် မူပိုင်ခွင့်ပါ လျှောက်ထားခဲ့ခြင်းဟု သတင်းများက ဆိုသည်။ ထို့အပြင် လျှောက်လွှာမှတ်တမ်း စာရွက်ပါ ဖော်ပြချက်အရ ယင်းစမတ်နာရီကို Samsungက Samsung Gearဟု အမည်ပေးထားကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ အမေရိကန်သို့ တင်ပို့ရောင်းချရန်အတွက် အမေရိကန်တွင် လျှောက်ထားခဲ့သော မူပိုင်ခွင့် ဖြည့်စွက်လွှာမှာ ယခုလို ပေါက်ကြားခဲ့ခြင်းဟု ဆိုသည်။ Samsungသည် မိမိတုိ့ အနေဖြင့် စမတ်နာရီ ဈေးကွက်ထဲ ဝင်ရောက်လာမည်ဟု မည်သည့်အခါကမျှ အတည်မပြုခဲ့သေးချေ။
သို့သော်လည်း စက်တင်ဘာလ (၄)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် Samsung Unpacked Eventတွင် ယင်းနာရီကို မိတ်ဆက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်း သတင်းများ ကျယ်ပြန့်နေသည်။ နယ်သာလန်မှ Samsung ထုတ်ကုန်များကို နှစ်သက်သူများ စုဖွဲ့ထားသည့် Galaxy Clubက Samsung Gear၏ သတင်းကို စတင် ခြေရာခံလာနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့က လက်တွင်ပတ်နိုင်သည့် ကိရိယာငယ် တစ်ခုသဖွယ် ဖန်တီးမည့် Samsung Gearသည် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ဖွယ် ရှိနေကြောင်း သုံးသပ်ထားသည်။
Samsung Gear၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကိုမူ ကြိုတင် မှန်းဆနိုင်ခြင်း မရှိသေးချေ။ သို့သော်လည်း Samsungထုတ်ကုန် စမတ်ဖုန်းများ၊ ကွန်ပျူတာများနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်၊ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များအတွက် စီမံခန့်ခွဲရန်၊ ခြေရာခံရန်စသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးဝင်စေမည်ဟု ယူဆထားသည်။ မူလက အဆိုပါ စမတ်နာရီ၏ အမည်ကို Galaxy Gearဟု သတ်မှတ်မည်ဟု သတင်းသဲ့သဲ့ ထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ယခုလျှောက်လွှာအရ Samsung Gaerဟုသာ အမည်ပေးမည်ဟု ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ဂျပန်ကုမ္ပဏီ Sonyသည် ဇွန်လက SmartWatch2အမည်ရှိ စမတ်နာရီကို မိတ်ဆက်ခဲ့သော်လည်း ယင်းသည် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု မပြုလုပ်နိုင်ဘဲ မိမိ၏ဖုန်းကို အဝေးထိန်း ကိရိယာ တစ်ခုသဖွယ် ချိတ်ဆက် ခိုင်းစေရန် အတွက်သာ စွမ်းဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ SmartWatch 2သည် Android OS အသုံးပြုထားသည့် ဖုန်းအားလုံးကို ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ဖုန်းအတွင်းမှ အချက်အလက်များကို Syncပြုလုပ် မှတ်သားပြီး နာရီScreenပေါ်တွင် Notification ပြသခြင်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မှုမျိုးဖြင့် ဝတ်ဆင်သူကို သတိပေး ထောက်ကူစေကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆန္ဒပြမှုကြောင့် ကင်တားနားနှင့် မြို့မိမြို့ဖများ တေ...
"ရှင်ဘယ်နေရာရောက်နေတုန်း၊ ရှင့်ကို စောင့်နေတယ်" - ...
မဟာမုနိဘုရားကြီး ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူရာနေရာသို့ မိန်းမလ...
ပြည်သူ့အသံ နားထောင်လို၍ တက္ကစီမောင်းသည့် နော်ဝေးဝန်...
ဘိုထိုင်အိမ်သာ အသုံးပြုလျှင် ယောက်ကျားလေးများ ကာလသ...
ခန္ဓာကိုယ်မှ အလိုအလျောက် မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့ ရောဂါဆန်...
အာကာသအတွင်းရှိ အဖိုးတန် ဓာတ်သတ္တုများကို NASA ထောက်...
Haswell chip ပါဝင်သည့် Latitude 7000 series Ultrab...
မိုးဟေကိုရဲ့ ဓာတ်ပုံကတော့ သိတဲ့အတိုင်းရေလည်လန်းတယ်...
Call Center က အိမ်တိုင်ရာရောက်လက်မှတ်ပို့ပေးသည့် ခ...
ကုလလူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနား ရခိုင်ပြည်...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကူးစက်တတ်သော ရောဂါများနှင့် ပတ်...
အင်တာနက်သုံးစွဲသူ ဆယ့်တစ်သိန်းကျော်တွင် ဖုန်းဖြင့်...
Apple လုပ်ခဲ့တဲ့ ကွယ်လွန်သူစတိဗ်ဂျော့ မကြိုက်တဲ့ အ...